Mgbagwoju anya nke Akwụkwọ Nsọ - IntegritySyndicate.com
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Nsụgharị Baịbụl
Okwu Mmalite: Mgbagwoju anya, Amabeghị ihe, na akụkọ ụgha Fallacious
Iwu nke ụlọ ọrụ
Abụ m Jehova, ma e wezụga m ọ dịghị onye nzọpụta dị
Jizọs Kraịst - ọ bụ Onyenwe ihe niile
Eze ndi eze na Onyenwenụ kachasị ndị nwenụ
Jehova wee sị Onyenwe m, Abụ Ọma 110
Kpọkuonụ aha Onyenwe anyị
Oche ikpe nke Chineke/Kraịst
Abụ m onye na -enyocha uche na obi
Ikpere ọ bụla ga -ehulata, ire niile ekwupụta
Onyenwe anyị Chineke - Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, Mkpughe 1: 8
Alfa na Omega, Mkpughe 1:11
Mbụ na Ikpeazụ, Mkpughe 1:17
Alfa na Omega, onye mbụ na onye ikpeazụ, Mkpughe 22:13
A ga -akpọ ya Chineke dị ike, nna ebighi -ebi, Aịsaịa 9: 6
Ga -akpọ aha ya Immanuel (Chineke nọnyeere anyị)
M ga -eziga onye ozi m, ọ ga -edozikwa ụzọ n'ihu m
Ndị Hibru 1: 8-12 na-ekwu maka Abụ Ọma 102: 25-28
Ha ga -elegide ya anya onye ha mara ube, Zekaraịa 12:10
Okwu Mmalite: Mgbagwoju anya, Amaghị ihe, na Ụgha Njikọta
Kama ikwenye Akwụkwọ Nsọ ndị akọwapụtara nke ọma na igosi ọdịiche dị n'etiti Jizọs na Chineke na njirimara na onlogy (1Tim 2: 5-6), ọtụtụ ndị na-arịọ mgbaghara nke Ndị Kraịst na-ejikọ amaokwu ọnụ, na-eji usoro okwu wee na-arụ ụka na Jizọs bụ Chineke site n'echiche ( omume nke ịgafe n'otu atụmatụ, nkwupụta, ma ọ bụ ikpe e weere dị ka eziokwu nye onye ọzọ nke ekwenyere na eziokwu ya ga -eso nke mbụ). Mperi nkịtị na -eche na n'ihi na Jizọs na Chineke nwere mmekọrịta chiri anya, na enyela ya utu aha, ikike na ike, nke a na -egosi na ọ bụ Chineke n'echiche nke ọnụnọ nkịtị (n'ụdị ya na njirimara ya). Ndị ịrịọ mgbaghara a na -eleghara iwu ndị Juu anya nke ukwuu - isi echiche nke Akwụkwọ Nsọ (lee https://biblicalagency.com)
Mgbaghara bụ ijikọ ozi abụọ ma ọ bụ karịa, ederede, echiche, wdg, n'ime otu, na -abụkarị njehie. N'echiche, ọ bụ omume ịgwọ echiche abụọ ma ọ bụ echiche yiri ya na ọnọdụ abụọ dị ka a ga -asị na ha bụ otu na -ebute njehie. Ụdị mgbagwoju anya na -adịkarị bụ ijikọta akụkụ Akwụkwọ Nsọ Agba Ochie banyere Onyenwe anyị Chineke na amaokwu Agba Ọhụrụ nke metụtara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na -akpụpụta syllogism n'etiti ha abụọ, na ị nweta nkwubi okwu site na ntinye. Mgbagwoju anya na -ekwekọghị ekwekọ na -eme mgbe okwu ndị ahụ apụtaghị otu ihe, mana kekọrịta otu okwu ma ọ bụ isiokwu. Ndị na -akụzi Akwụkwọ Nsọ na -adịkarị mfe na -arụkarị ọrụ a, nke okwu na isiokwu dị iche iche na -edozi ya nke na ha aghọtaghị ihe gbara ha gburugburu.
Ọmụmaatụ bụ isi ma ọ bụrụ na a adabaghị Mgbagwoju anya na -eche na Jizọs na -azọrọ Chineke, “Abụ m nke m” nke Ọpụpụ 3:14, mgbe ọ kọwara onwe ya site na iji okwu “abụ m” (ego efu n'asụsụ Grik) na oziọma. Ha na -eme nke a na -atụghị aka na okirikiri na nkọwa ndị Jizọs mere mgbe ọ na -akọwa onwe ya. Dịka ọmụmaatụ, Jizọs kwuru na Jọn 8:28, “Mgbe ị buliri Nwa nke madu, mgbe ahụ ị ga -ama nke ahụ m he (ego efu), na ka m ghara ime ihe ọ bụla n'onwe m, kama na -ekwu dị ka Nna m ziri m. N'ebe a, Jizọs na -akọwa onwe ya dị ka Nwa nke mmadụ (onye na -anaghị eme ihe ọ bụla n'ike nke aka ya) ma na -egosipụtakwa onwe ya na Nna nke kuziri ya ihe. Na Jọn 9: 9, otu nwoke kpuru ìsì nke a hụrụ ụzọ kwuru na m na -eji otu okwu Grik ahụ bụ "ego eimi." Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ikwupụta otuto dị ka “Abụ m” nke Nwa nke mmadụ (Mezaịa) jiri Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile mee. Maka ozi ndị ọzọ gbasara otu Jizọs siri gosipụta onwe ya n'Oziọma ahụ gụnyere nyocha nke okwu “Abụ m”, lee https://iamstatements.com.
Ọgba aghara na -abụkarị mgbọrọgwụ nke nkọwa ụgha nke Akwụkwọ Nsọ, mgbagwoju anya na usoro adịghị mma. Na Ntughari na -eme mgbe akọwapụtaghị nkebi ahịrịokwu, nkwupụta ma ọ bụ mkpebi, na -eme ka ọtụtụ nkọwa bụrụ ihe ezi uche dị na ya. Ụdị ihe mgbagwoju anya nke na -emeghe ọnụ ụzọ maka njehie bụ okwu mkparị na okwu mkparị. A enweghị nkọwa okwu na -eme mgbe okwu ma ọ bụ ahịrịokwu nwere ihe karịrị otu ihe n'asụsụ nke okwu ahụ bụ. A Enweghi nghọta na -eme mgbe otu okwu, ahịrịokwu ma ọ bụ ahịrịokwu, ewepụtara na gburugburu ya, nwere mmekọrịta karịa otu. Karịsịa ebe enwere ụdị ọgbaghara dị otu a, ndị na -arịọ mgbaghara ga -eme ka ihe ha chọrọ pụta n'amaokwu ahụ kama ịnwa idozi ihe edoghị anya site na ilele ọnọdụ gbara ya gburugburu. N'edemede a, anyị ga -eleba anya n'ihe mgbagwoju anya nke ndị na -arụ ụka na Jizọs bụ Chukwu ma dozie ihe mgbagwoju anya site na ịrịọ ozugbo na onodu.
Agbanyeghị na abụghị isi okwu, ekwesịrị ịkọwa na enwerekwa ọtụtụ ihe mgbagwoju anya n'ime Akwụkwọ Nsọ nke na -ebilite mgbe ahịrịokwu nwere ike inwe nkọwa abụọ (ma ọ bụ karịa) n'ihi nhazi ahịrịokwu (nhazi ya). A sụgharịrị amaokwu ụfọdụ iji gosi na Jizọs bụ Chineke gụnyere Ndị Rom 9: 5, Taịtọs 2:13, na 2 Pita 1, na 1 Jọn 5:20. Nsụgharị dị iche iche nwere ike ịsụgharị amaokwu ndị a n'ụzọ dị iche n'ihi na njikọta n'asụsụ mbụ enweghị mgbagwoju anya yana enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịhazi ahịrịokwu ahụ. Amaokwu ndị a na -egosipụta oke mgbagwoju anya ma a na -atụgharịkwa ya n'ụzọ kachasị mma maka "orthodoxy". Ekwesiri ighota na agbanyeghị, ọ bụrụgodi na amaokwu nwere ike na -ezo aka na Jizọs dị ka Chineke, ọ dịghị mkpa na echiche nke ọnụnọ nkịtị. Enwere ike ịkpọ ndị nnọchi anya Chineke dabere na iwu ụlọ ọrụ. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ sara mbara na -egosi na Jizọs bụ onye nnọchi anya Chineke - Mezaịa nke mmadụ. (lee https://onemediator.faith)
A syllogism bụ ụdị arụmụka ezi uche dị na ya iji ruo na nkwubi okwu dabere n'echiche abụọ ekwuru ma ọ bụ chee na ọ bụ eziokwu. E nwere ihe karịrị iri na abụọ ụdị ndakpọ metụtara syllogisms. Ọtụtụ ndị na -arịọ mgbaghara nke Ndị Kraịst na -eji usoro okwu eme ihe ma na -eme ya n'ụzọ adịghị mma. Ụgha bụ iji echiche na -ezighi ezi, na -enwekarị mmegharị na -ezighi ezi, n'ịrụ arụmụka. Arụmụka ụgha nwere ike iduhie site n'igosi na ọ ka mma karịa ka ọ dị n'ezie. Ụfọdụ ụgha na -eme ụma mee aghụghọ ma ọ bụ kwenye site na aghụghọ, ebe ndị ọzọ na -eme n'amaghị ama n'ihi akpachapụghị anya ma ọ bụ amaghị.
Ọmụmaatụ nke syllogism adịgboroja bụ
P1: Chineke bụ eze
P2: David bụ eze
C: David bụ Chukwu ma ọ bụ Chukwu bụ Devid
Nkwubi okwu na -ezighi ezi na -eburu n'uche na ka ị wee bụrụ eze, ị ga -abụrịrị Chineke na ọ bụ naanị Chineke ka a na -akpọ eze. Enwere ike inwe akụkụ nke ịbụ eze Chineke nke pụrụ iche mana nke ahụ anaghị achọ ka onye ọzọ bụrụ eze n'otu echiche ahụ. Ndị na -arịọ mgbaghara nke Ndị Kraịst na -ejikarị usoro okwu yiri nke a na -anwa ịkọwa na Jizọs bụ Chineke. N'ihe atụ dị n'elu, enwere ike iji okwu ndị ọzọ gbanwere "eze" gụnyere "onyenwe", "onye ikpe", na "onye nzọpụta". Mgbe etinyere asụsụ yiri ibe (otu ma ọ bụ asụsụ yiri ya) na ụlọ ọrụ abụọ dị iche iche, ọ naghị eme ka ha bụrụ otu onye, ​​ike ma ọ bụ ikike. Anyị ga -ekwupụta ihe mgbagwoju anya nke Jizọs na Chineke na -eji ụdị usoro okwu ụgha ndị a. Mbụ na -ahapụ nkenke ikpuchi echiche nke ụlọ ọrụ yana nke ikpeazụ vs. proximate (isi na nke abụọ kpatara).
A ihe kpatara ya bụ ihe kacha nso, ma ọ bụ ozugbo kpatara, ụfọdụ nsonaazụ a hụrụ. Nke a dị iche na ọkwa dị elu ihe kpatara ya nke a na -echekarị na ọ bụ “ezigbo” ihe mere ihe ji mee. (https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation)
Isi okwu nke Akwụkwọ Nsọ bụ na Chineke na -abụkarị ihe kpatara ya na Chineke na -eji ndị nnọchi anya emezu ebumnuche ya nke bụ ihe kpatara ya ma ọ bụ nke abụọ. Ka anyị were ihe atụ nke 2 Samuel 3:18 n'okpuru. Jehova (onye isi) bu mbụ/kacha ihe kpatara nzọpụta ebe David (onye nnọchi anya ya) bụ sekọndrị/nso n'ihi na dị ka ọ na -ekwu, "Site n'aka ohu m Devid, aga m azọpụta ndị m Izrel." Ma Chineke ma Devid bụ ndị nzọpụta n'ihe gbasara Israel. Ugbu a Chineke wetaara Izrel onye nzọpụta, Jizọs dịka o kwere na nkwa (Ọrụ 13:23)
Okwu Hibru maka onye nnọchi anya ma ọ bụ onye nnọchi anya iwu bụ Shaliach nke yiri ụwa Gris Ndịozi na okwu bekee bụ Apostle. Onye ozi bụ onye nnọchi anya onye isi ọrụ nyere ya ọrụ. Anyị na-agụ na Ndị Hibru 3: 1-2, Jizọs bụ onye ozi na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị wee bụrụ onye kwesịrị ntụkwasị obi nye onye họpụtara ya, dịka Mosis kwesịkwara ntụkwasị obi n'ụlọ Chineke niile. N'ezie, amaokwu Akwụkwọ Nsọ bụ na Jizọs bụ onye nnọchi anya Chineke. Maka ozi ndị ọzọ hụ nke a https://biblicalagency.com
Ndi Hibru 3: 1-2, Jisos onye ozishaliach) na nnukwu onye nchụàjà (onye ogbugbo) nkwupụta anyị
Chineke bụ onye mbụ na ihe kpatara nzọpụta. Ewezuga Chineke, onweghị ndokwa maka nzọpụta. Agbanyeghị, Chineke na -arụ ọrụ site n'aka ndị ọrụ mmadụ iji mezuo atụmatụ ya, a pụkwara ikwu na ha bụkwa ndị nzọpụta. Ndị nnọchite anya mmadụ a bụ ihe dị nso ma ọ bụ nke abụọ na -ebute nzọpụta. Ndị nzọpụta Chineke bụ ndị Chineke họpụtara ka ha mejupụta ntuziaka ya gụnyere ndị na -arụ ọrụ dị ka ndị ohu Chineke imejupụta atụmatụ Chineke maka nzọpụta. N'agbanyeghị mbọ ndị ọrụ mmadụ na -agba, enweghị nzọpụta ma e wezụga Chineke.
Akaebe nke Akwụkwọ Nsọ bụ na Chineke enyela anyị ndị nzọpụta. Nke a bụ ikpe doro anya dịka e kwuru na Nehemaịa 9:27. Ọzọkwa, ihe dị mkpa ịghọta bụ na Chineke bụ onye kacha akpata nzọpụta nakwa na ndị ahụ Chineke tere mmanụ bụ ndị nnọchianya yana ndị nzọpụta n'ime atụmatụ nke Chineke. Aịsaịa 43:10 na -ekwu, "Unu bụ ndị akaebe m, ka Jehova kwuru, na ohu m nke m họpụtara." N'otu aka ahụ, mgbanwe 1: 5-6 na-akọwa Jizọs dị ka, “onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na-achị ndị eze n'ụwa” wee kpọọ ya "onye hụrụ anyị n'anya ma mee ka anyị nwere onwe anyị." site ná mmehie anyị site n'ọbara ya wee mee anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke ya na Nna ya. ” Chineke onye nzọpụta anyị buliri Jizọs elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta (Ọrụ 5: 30-31).
22 Ma mb hee o wepusiri ya, ọ welie Devid ibu eze -ha, onye ọ b testiara àmà bayere ya, si, Achọtawom nime Devid nwa Jesi nwoke dika obim si achọ, onye g dome ihe nile m'nāchọ. 23 Nime nkpuru nwoke a, Chineke wetara Israel Onye nzọpụta, Jizọs, dịka o kwere na nkwa.
Mkpughe 1: 5-6, Jizọs Kraịst onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi-onye mere anyị ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya
Ka anyị were okwu a "Jizọs bụ Onyenwe ihe niile" dịka ọmụmaatụ. Nke a bụ nkwupụta na -emetụta dị ka iwu n'ozuzu ya na otu ihe dị mkpa - otu Chineke na Nna. Yabụ na anyị kwesịrị ịghọta na okwu a “Onye nwe ihe niile” na -efu “ihe okike”. Nke ahụ bụ na Jizọs bụ “Onyenwe ihe niile e kere eke” ọ bụghị “Onyenwe ihe niile” n'echiche zuru oke na -enweghị atụ. Enwere ọtụtụ amaokwu iji gosipụta ewezuga mkpokọta.
Ọlụ Ndị Ozi 10: 36-43 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Jizọs Kraịst-ọ bụ Onyenwe ihe niile
36 Banyere okwu ahụ o zigaara Izrel, na -ekwusa ozi ọma nke udo site na ya Jizọs Kraịst (ọ bụ Onye nwe ihe niile), 37 unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mb thee baptism nke Jọn kwusara siri, 38 ka Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya. 39 Anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe niile o mere ma n'obodo ndị Juu ma na Jerusalem. Ha gburu ya n'osisi n'elu osisi, 40 ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ wee mee ka ọ pụta ìhè, 41 ọ bughi madu nile, kama ọ bu ayi, ndi Chineke rọputara ibu ndi -àmà, ndi soro Ya rie ihe du kwa mb aftere O siri na ndi nwuru anwu bilie. 42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama nke ahụ ọ bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. 43 Ọ bụ ya ka ndị amụma niile na -agbara na onye ọ bụla nke kwere na ya na -enweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. ”
N'ime amaokwu a, anyị na -ahụ na Jizọs "bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ"
Nkọwa okirikiri nke “Onyenwe mmadụ niile” = onye ikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ
Ewezuga mkpokọta mkpokọta “ọ bụ Onye nwe ihe niile” bụ Chineke họpụtara ya onye ikpe
(1 Ndị Kọrịnt 15: 25-27) Chineke edobela ihe niile n'okpuru ụkwụ ya
25 N'ihi na ọ ga -abụrịrị eze ruo mgbe o debere ndị iro ya niile n'okpuru ụkwụ ya. 26 Onye iro ikpeazụ a ga -ebibi bụ ọnwụ. 27 n'ihi na "Chineke edowo ihe nile n'okpuru ukwu Ya. " Ma mgbe ọ na -ekwu, “e doro ihe niile n'okpuru,” ọ pụtara nke ọma na ewezuga onye tinye ihe niile n'okpuru ya..
Anyị nwere ike ịsị na Jizọs bụ “Onyenwe ihe niile” n'ihi na Chineke edowo ihe niile n'okpuru ụkwụ ya.
Chineke ewezugara onye doro ihe nile n'okpuru ya. (Amaokwu 27 kwuru nke a n'ụzọ doro anya)
Nkọwa okirikiri pụtara na Jizọs bụ Onyenwe ihe niile ma e wezụga Chineke onye doro ihe niile n'okpuru ya.
Ọlụ Ndị Ozi 2: 34-36, Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst
34 N'ihi na Devid arịgoghị n'eluigwe, kama ya onwe ya na -asị, ''Onyenwe anyị wee sị Onyenwe m, Nọdụ ala n'aka nri m, 35 rue mb͕e M'gēme ka ndi-iro-Gi buru ihe-nb͕akwasi-ukwu-Gi. 36 Ya mere, ka ụlọ Izrel dum mara nke ọma Chineke mere ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst ahụ, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe. "
Mesaya ahụ bụ Eze Devid
Jehova Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst (Mesaya)
Jehovah Abasi edi Ọbọn̄ Jesus
Ndị Filipaị 2: 8-11, Chineke buliri ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile.
Chineke buliri ya elu (Jizọs) wee nye ya aha dị elu karịa aha niile
A na -ekwukarị ndị kwesịrị ịkpọrọ ya isiala dị ka ndị “nọ n'eluigwe na n'ụwa na n'okpuru ụwa"
Ire ọ bụla kwesịrị ikwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị (Jizọs bụ Onyenwe anyị Mesaya) ka e wee nye Chineke (Nna) otuto.
Chineke (onye buliri ya elu) ka a gụpụrụ ndị ga -akpọ isiala nye Jizọs
Amaokwu ndị ọzọ na -akọwa ihe dị iche bụ nke a
Akpọrọ Chineke onye “bi n'ìhè a na-apụghị ịbịaru nso” na onye “ọ nweghị onye hụtụrụla ma ọ bụ hụ anya” ka akpọrọ “naanị Eze, ndị eze ndị eze na Onyenwenụ ndị nwenụ” na 1 Tim 1: 15-16. Na Mkpughe 14:14 na Mkpughe 19:14, a na -akpọkwa Jizọs (Nwa Atụrụ ahụ) Eze nke ndị eze na Onyenwenụ kachasị ndị nwenụ niile. Dịka anyị hụrụ na ngalaba nke bu ụzọ Jizọs ịbụ “Onyenwe mmadụ niile” nwere ewezuga Chukwu onye mere ya onyenwe. N'otu aka ahụ, ọ bụ ikpe na enwere ike ịkpọ ma Chineke ma Jizọs "Eze nke ndị eze na onyenwe ndị nwenụ" ebe ọ bụ na nchịkọta nke a metụtara ma Chineke ma Jizọs. Agbanyeghị n'ihe banyere Jizọs, Chineke ka bụ ihe ewezuga (1 Ndị Kọrịnt 15:27). Anyị na-ahụ na Mkpughe 12: 10-10 na, “ikike nke Kraịst ya abịawo alaeze Chineke anyị. Anyị na -ahụ n'amaokwu a na -egosi na Kraịst dị iche na Chineke nakwa na ikike nke Kraịst (Mesaịa) adịghị adị mgbe niile.
Ọ ga -abụ ịgha ụgha nke ihe mberede (nke ihe ọghọm) iji kpughee njirimara onwe onye na ihe ọmụmụ nke Jizọs na Chineke n'ihi na ejiri okwu okwu mee ihe maka Chineke n'echiche zuru oke mana ọ na -emetụtakwa Jizọs n'echiche nke nwere oke mmachi (ebe Chineke bụ ewezuga). N'ime Akwụkwọ Nsọ, a na -ejikwa “eze ndị eze” maka ndị isi kachasị elu n'ụwa gụnyere Artasasta na Ezra 7:12, na Nebukadneza eze Babilọn na Ezikiel 26: 7 na Darnel 2:37.
1 Timoti 6: 15-16 (ESV), Ọ bụ naanị Eze, eze ndị eze na Onyenwenụ kachasị ndị nwenụ
15 nke ọ ga -egosipụta n'oge ya — onye ahụ bụ onye a gọziri agọzi na naanị Ọkaakaa, Eze ndị eze na Onyenwenụ kachasị ndị nwenụ niile, 16 onye nanị ya nwere anwụghị anwụ, onye bi n'ìhè a na -apụghị ịbịaru nso, onye ọ na -ahụtụbeghị ma ọ bụ hụ ya. Ọ bụ ya nwe nsọpụrụ na ịchịisi ebighi ebi. Amen.
Mkpughe 12: 10-11 (NIV), alaeze Chineke anyị na ikike nke Kraịst ya abịala
10 M wee nụ oké olu n'eluigwe, na -asị, "Ugbu a bụ nzọpụta na ike na alaeze nke Chineke anyị na ikike nke Kraịst ya abịawo, n'ihi na a tụdawo onye na -ebo ụmụnna anyị ebubo, onye na -ebo ha ebubo ehihie na abalị n'ihu Chineke anyị. 11 Ha emeriela ya site n’ọbara Nwa-aturu ahu na site n'okwu ọgbụgba -ama ha, n'ihi na ha ahụghị ndụ ha n'anya ọbụna ruo ọnwụ.
Mkpughe 17:14 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Nwa Atụrụ ahụ, ọ bụ Onyenwe ndị nwenụ na Eze ndị eze
14 Ha ga -ebuso Nwa Atụrụ ahụ agha Nwa Atụrụ ahụ ga -emeri ha, n'ihi na ọ bụ Onyenwe ndị nwenụ na Eze ndị eze, na ndị ya na ha nọ ka a kpọrọ, ndị ahọpụtakwara na ndị kwesịrị ntụkwasị obi. ”
Kraịst dị iche na Chineke na Nkpughe 12:10
Kraịst bụ nwa atụrụ Rev 12:11
Nwa Atụrụ ahụ dị iche na Chineke
Nwa Atụrụ Chineke bụ “Onyenwe ndị nwenụ na Eze ndị eze” ewezuga Chineke
Mkpughe 19:16 (NIV) Aha e dere, Eze ndị eze na Onyenwenụ kachasị ndị nwenụ
16 N'uwe mwụda ya na n'apata ụkwụ ya o nwere aha e dere, Eze nke ndị eze na Onyenwenụ kachasị ndị nwenụ.
(Ezra 7:12) Ataksakses, eze ndị eze
12 "Artasasta, eze ndị eze, nke Ezra, bú onye -nchu -àjà, ode -akwukwọ nke iwu Chineke nke elu -igwe. Udo.
EZIKIEL 26: 7, Nebukadneza, bú eze Babilon, eze ndi -eze
7 N'ihi na otú a ka Onye -nwe -ayi Jehova siri: Le, M'gaje ime ka Taia si n'Ugwu bia Nebuchadnezzar edidem Babylon, edidem ndidem, tinyere ịnyịnya na ụgbọ ịnyịnya, na ndị na -agba ịnyịnya na ọtụtụ ndị agha.
Daniel 2: 37 (ESV), ndị eze nke ndị eze, onye Chineke nke eluigwe nyere alaeze ahụ
37 Ị, eze, eze ndị eze. Onye Chineke nke eluigwe nyeworo alaeze, ike, na ume, na ebube,
Edere Abụ Ọma 110: 1 ”n'ọtụtụ ebe na agba ọhụrụ gụnyere Matiu 22:44, Mak 12:36, Luk 20:42, Ọrụ 2:34 na Ndị Hibru 1:13. Nkebi ahịrịokwu a "ONYENWE ANYỊ na -asị Onyenwe m" yiri ka ọ na -akọwa na e nwere ndị nwenụ abụọ, ụfọdụ nwere ike were na nke a bụ ihe akaebe na Jizọs bụ Chineke. Agbanyeghị, Abụ Ọma nke 110 metụtara ihe YHWH gwara Mesaịa nke mmadụ.
Nsụgharị gaa na okwu Onyenwe anyị
(Yahweh ma ọ bụ Jehova) Okwu a bụ “Onyenwe anyị” nke mbụ n'Abụ Ọma 110: 1. Ọ bụ aha Chineke nke ndị Juu weere dị ka ihe dị nsọ nke na a kpọghị ya akpọtụ. Kama, mgbe ha na -agụ Akwụkwọ Nsọ, ha na -edochi okwu a "Adonai". Nkwekọrịta a nabatara bụ na na ntụgharị asụsụ Bekee, ọ na -apụta mgbe niile dị ka ma ọ bụ ONYENWE ANYỊ, ma ọ bụ CHINEKE (nke kachasị elu) si otú a na -enyere anyị aka ịghọta na okwu mbụ bụ “Yahweh.”
Okwu a sitere na mgbochiume Hibru Aleph, Dalet, Nun. Ọ na -apụtakarị n'ụdị a (na -enweghị mgbakwunye ọ bụla). Ewezuga ihe dị ka ugboro iri atọ ebe ọ na -ekwu maka Chukwu dị nsọ, ihe omume ndị ọzọ niile na -ekwu maka ndị nwenụ.
Na ụdị ya, ọ na -ezo aka na Chineke oge niile, na ọ dịghị onye ọzọ. “Mgbakọ ndị ntụgharị” nabatara bụ na n'ụdị a, ọ na -apụta mgbe niile n'asụsụ Bekee dị ka “Onyenwe anyị” (nke nwere nnukwu mkpụrụedemede “L”)
Emepụtara nke a site na ịgbakwunye mgbakwunye "i" na "adon". Na mgbakwunye a ọ pụtara "onyenwe m.”(A na -asụgharịkwa ya mgbe ụfọdụ dị ka“ nna ukwu. ”) Ọ pụtara ugboro 195, a na -ejikwa ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nwe mmadụ (mana oge ụfọdụ nke ndị mmụọ ozi). Mgbe a sụgharịrị ya “onyenwe”, ọ na -apụta mgbe niile na obere mkpụrụedemede “l” (ewezuga otu oge ahụ na Abụ Ọma 110: 1) Ndepụta pdf nke ebe 195 mere adoni n'amaokwu 163 dị ebe a: https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874
Okwu Hibru e ji mee ihe maka “Onyenwe anyị” na -ekwu maka Jizọs, “Onyenwe anyị gwara m Jehova”Bu ADONI. Okwu a na -ezo aka ndị nwenụ mmadụ. Ọ na -ekwu maka mmadụ nke Jizọs - ọ bụghị chi. Na okwu Grik ndị agha a na -eji ya ugboro abụọ. Kyrios, nke a sụgharịrị ịbụ '' onyenwe '' bụ okwu nkịtị nke pụtara nna ukwu, ọ bụghịkwa okwu ejiri naanị Chukwu mee. Anyị maara na enwere ọtụtụ ndị a na-akpọ “ndị nwenụ” mana n'ihe gbasara okwukwe anyị, Jizọs bụ otu Onyenwe anyị nke anyị na-esite na ya nweta nzọpụta bụ ndokwa site n'aka otu Chineke na Nna-onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị bụ maka ya (1 Cor 8). : 5-6).
N'amaokwu nke Abụ Ọma 110: 1-4, anyị na-ahụ na Onyenwe anyị (adoni. Nke a bụkwa ihe ngosi dị mkpa. Ndị isi nchụàjà bụ ndị nnọchiteanya nke Chineke bụ ndị a họpụtara site na mmadụ. Ndị Hibru 5 nwere njikọ na Abụ Ọma 110:
A na -eji ahịrịokwu ahụ “kpọkuo aha Onyenwe anyị” maka Onyenwe anyị Chineke na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Ụfọdụ na -agbalịa iwepụta Abụ Ọma 116: 4 ma ọ bụ Joel 2:32 na 1 Ndị Kọrịnt 1: 2 iji ghọta na Onyenwe anyị Jizọs bụ Onyenwe anyị Chineke. Agbanyeghị anyị egosila na ha abụọ bụ ndị nzọpụta (Jizọs bụ ndokwa Chineke maka nzọpụta) yana na Onyenwe anyị Chineke bụ Onyenwe Onyenwe anyị Jizọs. Jizọs, Ọkpara Chineke bụ mmadụ bụ otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ (1 Tim 2: 5-6). Kraist guzoro dị ka onye nnọchi anya Chineke ịbụ Onyenwe anyị nke Chineke tinyere n'ọnọdụ ka ọ bụrụ onye ogbugbo n'etiti ya na mmadụ. Jisus bụ onye isi nchụ-aja anyị site na ya ka anyị na Chineke na-adị ná mma (Lee Ndị Hibru 8: 1-6, Ndị Hibru 9: 11-14, na Ndị Hibru 9: 23-28).
Ịkpọku aha Onyenwe anyị nwere ihe dị iche na ọgbụgba ndụ ochie ahụ karịa ka ọ dị ugbu a n'ọgbụgba ndụ ọhụrụ. N'ọgbụgba ndụ ochie ahụ, a kọwapụtara Jehova Chineke dị ka Onyenwe anyị dị ka okwukwe Israel siri kwuo, "Nụrụ Israel: Jehova Chineke anyị, Jehova bụ otu." (Deut 6: 5) N'ihe gbasara okwu Onyenwe anyị nke a sụgharịrị site n'okwu Grik kurios, nke a bụ okwu nkịtị maka “onyenwe” ma ọ bụchaghị nke Jehova (YHWH) Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile n'Abụ Ọma 116: 4. Ihe na -eme ebe a bụ mgbagwoju anya nke aha Onyenwe anyị Chineke na okwu nkịtị maka onyenwe n'asụsụ Grik. N'okpuru bụ nkọwa sitere na ọkọwa okwu BDAG maka okwu Grik κύριος (onye nwe ya tụgharịrị).
Onye isi mng. metụtara inwe ike ma ọ bụ ikike, n'echiche dị iche iche: 'siri ike, nwee ikike, dị irè, na -achị achị'; mgbe ahụ, nye nke bụ isi dị mkpa, dị mkpa
1 onye na -ahụ maka ihe onwunwe, onye nwe ya
2 onye nọ n'ọkwa ọchịchị, onyenwe, nna ukwu
N'ọgbụgba ndụ ọhụrụ Chineke emeela Jizọs ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst (Ọrụ 2:36). Ugbu a enwere onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Jizọs Kraịst (1 Tim 2: 5-6). Ọ bụ ya ka Chineke buliri elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta (Ọrụ 5:31). N'ime usoro ọhụrụ a, n'agbanyeghị na enwere ọtụtụ ndị akpọrọ 'chi' na ọtụtụ ndị akpọrọ 'ndị nwenụ,' maka anyị enwere otu Chineke, Nna na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst (1 Cor 8: 5-6). N'ọdịiche nke "chi" - enwere otu Chukwu Nna. N'ime udi "ndị nwenụ" - enwere otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst. Ọ bụ ezie na Chineke Nna ka bụ Onyenwe (YHWH) ihe niile (n'echiche zuru oke), o mere Jizọs Kraịst Onyenwe anyị ka ọ bụrụ onye ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume na ịchị n'ọchịchị nke a ga -ehiwe. Nke ahụ bụ, Jizọs bụ Mesaya ahụ bụ mmadụ nke a ga -enye na alaeze ebighi ebi. Agbanyeghị ikike a sitere na otu Chineke na Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị dịịrị maka ya (1 Cor 8: 5-6).
Abụ Ọma 116: 4, a na -akpọku aha Jehova
4 Mgbe ahụ m akpọku aha Jehova: “Jehova, biko, napụta mkpụrụ obi m!”
Ndị Rom 10: 12-13, onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị, a ga-azọpụta ya
12 N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye Grik; n'ihi na otu Onyenwe anyị ahụ bụ Onyenwe ihe niile, na -enye ndị niile na -akpọku ya akụ na ụba ya. 13 n'ihi na "onye ọ bụla nke ga -akpọku aha Onyenwe anyị, a ga -azọpụta ya. "
Joel 2:32, Onye ọ bụla nke na -akpọku aha Jehova ka a ga -azọpụta
32 Ma ọ ga -eru na onye ọ bụla nke ga -akpọku aha Jehova ka a ga -azọpụta. N'ihi na n'ugwu Zaion na nime Jerusalem ka ndi b whoapuru ab escapeapu gādi, dika Jehova kwuworo, n'etiti ndi fọduru gādi kwa ndi Jehova gākpọ.
Ọlụ Ndị Ozi 2: 20-21, Onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị, a ga-azọpụta ya
20 Anyanwu gāb turnedanwe ghọ ọchichiri, ọnwa gāb toanwe kwa ka ọbara, tutu ubọchi Jehova abia, bú ubọchi uku ahu di kwa ebube. 21 Ma ọ ga -eru na onye ọ bụla nke na -akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga -azọpụta. '
1 Ndị Kọrịnt 1: 1-3, Kpọkuonụ aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
1 Pọl, onye a kpọrọ site n'ọchịchọ Chineke ịbụ onyeozi nke Kraịst Jisọs, na nwanne anyị nwoke bụ Sostenes, 2 Maka nzukọ Chineke nke dị na Kọrint, nye ndị e doro nsọ n'ime Kraịst Jizọs, ndị a kpọrọ ka ha bụrụ ndị nsọ na ndị niile nọ n'ebe niile kpọkuo aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ma Onyenwe ha ma nke anyị: 3 Amara diri gi, na udo nke sitere n’aka Chineke, bú Nna-ayi, na nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.
36 Ya mere ka ulo Israel nile mara nke -ọma na Chineke mere ya ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst ahụ, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe. "
1 Ndị Kọrịnt 8: 5-6, Maka anyị, e nwere otu Chineke, Nna, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst
5 N'ihi na n'agbanyeghị na enwere ike ịkpọ chi dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa-n'ezie enwere ọtụtụ "chi" na ọtụtụ "ndị nwenụ"- 6 ma maka anyị, e nwere otu Chineke, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị dịrị maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye onye ihe nile sitere n'aka ya na onye anyị sitere n'aka ya.
1 Timoti 2: 5-6, Otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs
Ụfọdụ na-agbagọ Ndị Rom 14: 9-12 na 2 Ndị Kọrịnt 5: 9-10 iji kọwaa na a na-eji usoro ikpe nke Chineke mee otu ihe atụ, a na-ejikwa oche ikpe nke Kraịst na-atụ aro na Kraịst bụ Chineke n'ụdị njirimara ya. Nka bu ihe omuma atu ozo nke nezutara na enweghi nghota na Chineke họputara Jisos ka O kpe uwa ikpe n'ezi omume (Olu 17: 30-31). Ọ bụ ezie na Jizọs Kraịst ga -ekpe ikpe n'ezie, Chineke bụ ikike n'azụ ya (Chineke nyere ya) dịka ọ na -ekwu Ọrụ 10:42, "ọ bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ." N'ihi ya, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na oche ikpe na-ejikọ ma Chineke na Kraịst, otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ (1 Tim 2: 5-6).
Mkpughe 20: 11-13 na-akọwa ikpe ikpe ocheeze ọcha. Ọ bụ ezie na ekwughị onye na -ekpe ikpe, anyị nwere ike si n'ihe akaebe ziri ezi nke Akwụkwọ Nsọ kọwaa na ọ bụ Jizọs Kraịst (akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị ka zie ezi karịa na -agụ "ocheeze" na Nkpughe 20:12, ọ bụghị "Chineke"). N'echiche ndị Juu nke Akwụkwọ Nsọ, ọ nweghị ihe ga -agbagwoju anya na echiche na oche ikpe nke “Chineke” bụ oche ikpe nke “Kraịst.” Echiche nke ụlọ ọrụ zuru ezu. Chineke bụ ike na -akwado ikpe ahụ, emezuru ya site n'aka onye nnọchi anya ya nke o buliri elu n'aka nri ya, Jizọs Kraịst. Ya mere, ọ bụ oche ikpe nke Chineke n'ihi na o nwere ikike kachasị ya. Agbanyeghị, ọ bụ oche ikpe Kraịst n'ihi na ọ na -ekpe ikpe n'ezie. Jizọs Kraịst mere ka o doo anya na ọ ga -ekpe ikpe ahụ n'ezie mgbe ọ sịrị: “Nna m anaghị ekpe onye ọ bụla ikpe, kama o nyefere Ọkpara ikpe niile… O nyekwara ya ikike ikpe ikpe n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ. Mụ onwe m apụghị ime ihe ọ bụla; M na -ekpe ikpe naanị dị ka m si anụ, ikpe m ziri ezi, n'ihi na achọghị m ime ihe masịrị m, kama onye zitere m ”(Jọn 5:22, 27, 30).
Ndị Rom 14: 9-12 (ESV), oche ikpe Chineke
9 N'ihi na ọ bụ n'ihi nke a ka Kraịst nwụrụ ma dịrịkwa ndụ ọzọ, ka o wee bụrụ Onyenwe ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ. 10 Gịnị mere i ji ekpe nwanne gị ikpe? Ma ọ bụ gị, gịnị mere i ji eleda nwanne gị anya? N'ihi na anyị niile ga -eguzo n'ihu oche ikpe Chineke; 11 n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ,Mu onwem nādi ndu, ka Onye -nwe -ayi kwuru, ikpere nile gākpọ isi ala nye m, ire ọ bula g shallkwuputa kwa Chineke. " 12 Ya mere onye ọ bụla n'ime anyị ga -aza Chineke ajụjụ maka onwe ya.
2 Ndị Kọrịnt 5: 9-10 (ESV), oche ikpe nke Kraịst
9 Ya mere, ma anyị nọ n'ụlọ ma anyị anọghị, anyị na -eme ya ebumnuche anyị ime ihe na -atọ ya ụtọ. 10 N'ihi na anyị niile ga -apụta n'ihu oche ikpe nke Kraịst, ka onye ọ bụla wee nata ihe kwesịrị maka ihe o mere n'anụ ahụ, ma ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ.
Ọlụ Ndị Ozi 10:42 (NIV), Ọ bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ikpe
42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama nke ahụ ọ bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ.
Ọrụ 17: 30-31 (NIV), Chineke ga-ekpe ụwa ikpe site n'aka nwoke ọ họpụtara
Jọn 5: 25-29, O nyela ya ikike ikpe ikpe-Nwa nke mmadụ
25 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ. 26 N'ihi na dika Nnam nwere ndu nime onwe -ya, otú a ka O nye -kwa -ra Ọkpara -Ya inwe ndu nime Onwe -ya. 27 na o nyewo ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ. 28 Ka ihe a ghara iju unu anya, n'ihi na oge awa na -abịa mgbe ndị niile nọ n'ili ga -anụ olu ya 29 puta -kwa -ra, ndi mere ezi ihe rue nbilite -n'ọnwu nke ndu, ndi mere ajọ ihe gābilite na nbilite -n'ọnwu nke ikpé.
Mkpughe 20: 11-12 (ESV), guzo n'ihu ocheeze (ihe odide mbụ)
11 Mgbe ahụ, ahụrụ m nnukwu ocheeze ọcha na onye nọ n'elu ya. Ala na mbara igwe gbapụrụ n'ihu ya, ọ dịghịkwa ebe a hụrụ ha. 12 M wee hụ ndị nwụrụ anwụ, ndị ukwu na ndị nta, guzo n'ihu ocheeze ahụ, e mepere akwụkwọ. Ewe meghe akwụkwọ ọzọ, nke bụ akwụkwọ nke ndụ. Ekpekwara ndị nwụrụ anwụ ikpe site n'ihe edere n'akwụkwọ, dịka ihe ha mere siri dị.
Mkpughe 20: 11-12 (KJV), Guzo n'ihu Chineke (ihe odide ochie)
11 M'we hu oké oche -eze di ọcha, na onye nānọkwasi ya, onye elu -uwa na elu -igwe b fromapuru n'iru ya; ma ahughi ebe nye ha. 12 M wee hụ ndị nwụrụ anwụ, ndị nta na ndị ukwu, guzo n'ihu Chineke; ewe meghe akwụkwọ: e meghekwara akwụkwọ ọzọ, nke bụ akwụkwọ nke ndụ: e kpekwara ndị nwụrụ anwụ ikpe site n'ihe ndị ahụ edere n'akwụkwọ, dịka ọrụ ha siri dị.
Mkpughe 2:23, "Abụ m onye na -enyocha uche na obi, m ga -enye onye ọ bụla n'ime gị dịka ọrụ gị siri dị," gbasara Jizọs, na -enwekarị njikọ. 1 Ihe E Mere 28: 9, “JEHOVA na -enyocha obi niile, na -aghọtakwa atụmatụ niile na echiche niile” ma ọ bụ jiri Jeremaịa 17:10, "Mụ onwe m bụ Jehova na -enyocha obi wee nwalee uche, inye onye ọ bụla dị ka ụzọ ya si dị, dị ka mkpụrụ nke omume ya si dị." Ndị mmadụ na -amata n'ihi na Onyenwe anyị (YHWH) na -enyocha obi niile na Jizọs na -eme ugbu a na ha bụ otu na isi na na Jizọs bụ Chukwu n'echiche nke onlogical. Ebe ọ bụ eziokwu n'Agba Ochie na Chineke bụ onye ọkaikpe na -arụsi ọrụ ike nke mmadụ, otu Chineke na Nna anaghị ekpe onye ọ bụla ikpe ọzọ kama o nyela Ọkpara ikpe niile. (Jọn 5:22)
O doro anya na Ọrụ 10:42, "Jizọs bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ," yana na Ọrụ 17:32, "Chineke… ezi omume site na onye ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. ” Nke a kwekọrọ n'ụzọ zuru oke na nghọta Akwụkwọ Nsọ nke 1 Tim 2: 5-6, "Otu Chineke dị, yana otu onye ogbugbo dị n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile." Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị a na-akpọ 'chi' na ndị a na-akpọ 'ndị nwenụ' 'mana maka anyị, e nwere otu Chineke, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị dịrị maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile si n'aka ya. na onye anyị sitere n'aka ya (ya bụ, onye anyị sitere n'aka ya nweta nzọpụta). (Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 8: 5-6.) Chineke mere Jizọs ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst. (Ọrụ 2:36)
N'ụzọ doro anya, etinyela Jizọs n'ọnọdụ ikpe (na -enyocha obi) ọ nwere ike ime nke a n'ihi na Chineke nyere ya ike - ọ bụghị n'ihi na ọ bụ Chineke nke mmụọ. Ike nke inye ndụ na ikpe bụ otu Chineke na Nna nyere ya (Jọn 5: 25-29). Ọ bụ n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ, na e nyere ya ikike ime ikpe. (Jọn 5:27). Site n'ike nke Mmụọ Nsọ, nke enyerela Jizọs, enwere ike inyocha obi, dịka o kwuru na Ndị Rom 8:27, "Onye na -enyocha obi maara ihe bụ uche nke mmụọ, n'ihi na mmụọ na -arịọchitere ndị nsọ arịrịọ. dika uche Chineke si di.
Amụma nke Mesaịa nke Aịsaịa 11: 1-4 doro anya na a ga-enye Mesaịa ikike ikpe ikpe mana o dokwara anya na ọ ga-ekpe ikpe ziri ezi n'ihi na mmụọ Chineke nyere ya ike ime ya, dịka o kwuru, “ Mmụọ nke Jehova ga -adakwasị ya, mmụọ nke amamihe na nghọta, mmụọ ndụmọdụ na ike, mmụọ ihe ọmụma na egwu Jehova. ” (Aịsaịa 11: 2) Jizọs, Onyenwe anyị Mesaịa, agaghị eji ihe anya ya hụrụ na -ekpe ikpe, ma ọ bụ jiri ntị ya nụ ikpe ikpe, kama ọ ga -eji ezi omume, site na mmụọ nke Jehova (YHWH), kpee ikpe. (Aịsaịa 11: 3-4)
Mkpughe 2:23 (ESV), abụ m onye na -enyocha uche na obi
3 m ga -egbukwa ụmụ ya. Na ụka niile ga -ama nke ahụ Abụ m onye na -enyocha uche na obi, aga m enye onye ọ bụla n'ime gị dịka ọrụ gị siri dị.
(1 Ihe E Mere 28: 9) Jehova na -enyocha obi niile ma na -aghọta echiche niile
9 "Ma gị onwe gị, Solomon nwa m, mara Chineke nke nna gị wee jiri obi gị dum na obi dị njikere na -efe ya ofufe, n'ihi na Jehova na -enyocha obi niile ma na -aghọta atụmatụ na echiche niile..
JEREMAIA 17:10, Mu onwem, bú Jehova, n searchnyocha obi, nānwa kwa uche
10 "Mụ onwe m, Jehova, na -enyocha obi, na -anwale uche, inye onye ọ bụla dị ka ụzọ ya si dị, dị ka mkpụrụ nke omume ya si dị."
Jọn 5: 19-22 (NIV), TỌ dighi onye ọ bula n Fatherkpe Nnam ikpe, kama O werewo ikpé nile nye Ọkpara -Ya
19 Ya mere Jisus siri ha, N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọkpara ahụ enweghị ike ime ihe ọ bụla n'onwe ya, mana naanị ihe ọ hụrụ ka Nna na -eme. N'ihi na ihe ọ bụla Nna na -eme, nke ahụ ka Ọkpara ya na -emekwa. 20 N'ihi na Nna m hụrụ Ọkpara ya n'anya ma gosi ya ihe niile ya onwe ya na -eme. Ọ ga -egosikwa ya ọrụ ndị karịrị nke a, ka o wee ju gị anya. 21 N'ihi na dị ka Nna m na -akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ ma na -enye ha ndụ, otu ahụ ka Ọkpara na -enyekwa onye ọ chọrọ. 22 N'ihi na Nna anaghị ekpe onye ọ bụla ikpe, kama o nyela Ọkpara ikpe niile
42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama na ọ bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ.
Ọrụ 17: 30-31 (HV), He ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka otu nwoke onye ọ họpụtara
1 Timoti 2: 5-6 (NIV), Tebe a bụ otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs
(1 Ndị Kọrịnt 8: 5-6) Otu Chineke dị, bụ Nna, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst
5 N'ihi na n'agbanyeghị na enwere ike ịkpọ chi dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa-n'ezie enwere ọtụtụ "chi" na ọtụtụ "ndị nwenụ"- 6 ma maka anyị, e nwere otu Chineke, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị dịrị maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị sitere n'aka ya..
Ọlụ Ndị Ozi 2:36 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst
36 Ya mere ka ulo Israel nile mara na Chineke emewo ya ka oburu Onyenwe ayi na Kraist, Jisos a onye unu kpogidere. "
(Jọn 5: 25-29) O nyewo ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ
25 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ. 26 N'ihi na dika Nnam nwere ndu nime onwe -ya, otú a ka O nye -kwa -ra Ọkpara -Ya inwe ndu nime Onwe -ya. 27 O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ. 28 Ka ihe a ghara iju unu anya, n'ihi na oge awa na -abịa mgbe ndị niile nọ n'ili ga -anụ olu ya 29 ma pụta, ndi mere ezi ihe na nbilite n'onwu nke ndu, na ndi mere ajọ omume rue nbilite -n'ọnwu nke ikpé.
Ndị Rom 8: 26-27 (ESV), Onye na-enyocha obi maara ihe bụ uche nke mmụọ
26 N'otu aka ahụ Mmụọ na -enyere anyị aka n'adịghị ike anyị. N'ihi na anyị amaghị ihe anyị ga -ekpe ekpere dị ka anyị kwesịrị, mana Mmụọ n'onwe ya na -arịọchitere anyị arịrịọ site na ịsụ ude nke ukwuu maka okwu. 27 Na onye na -enyocha obi maara ihe bụ uche nke mmụọ nsọ, n'ihi na mmụọ na -arịọchitere ndị nsọ arịrịọ dịka uche Chineke si dị..
Aisaia 11: 1-4 IGBOB-Mọ nke Jehova gādakwasi ya
1 Ome ga -esi n’úkwù osisi Jesi pụta,
alaka nke sitere na mgbọrọgwụ ya ga -amị mkpụrụ.
2 na Mmụọ Jehova ga -adakwasị ya,
Mmụọ nke amamihe na nghọta,
Mmụọ nke ndụmọdụ na ike,
mmụọ nke ihe ọmụma na egwu Jehova.
3 Ihe na -atọ ya ụtọ ga -abụ ịtụ egwu Jehova.
Ọ gaghị eji ihe anya ya hụrụ na -ekpe ikpe.
Ma ọ bụ jiri ihe ntị ya nụrụ kpebie esemokwu,
4 ma ọ ga -eji ezi -omume kpee ogbenye ikpe;
kpebiekwa ikpe ziri ezi maka ndị dị umeala n'obi n'ụwa;
Ụfọdụ na -azọrọ na ịkpọ isi ala na ikwupụta dịka Onyenwe anyị bụ ihe dịịrị naanị Chineke, yabụ na Jizọs bụ Chukwu site n'echiche. Nke a dabere na ụfọdụ amaokwu na -egosi ịkpọ isiala na ikwupụta Chineke na ndị ọzọ na -egosi ịkpọ isiala na ikwupụta Jizọs Kraịst (Mesaya). Nsogbu dị n'echiche a dịka na ikpere ọ bụla ga -ehulata, ire ọ bụla na -ekwupụta mmadụ dị ka Onyenwe anyị, ọ bụghị naanị na ọ metụtara Chineke, kamakwa ọ ga -emetụtakwa onye nnọchi anya Chineke nọ n'aka nri Chineke.
Chineke buliri Jizọs elu wee mee ya onye ndu na onye nzọpụta (Ọrụ 5:31). Anyị na-agụ na Ndị Filipaị 2: 8-11, na n'ihi Jizọs rubere isi ruo ọnwụ, na Chineke buliri ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile (ikike karịrị ikike niile). Anyị na-agụ na Jọn 3:35, "Nna m hụrụ Ọkpara ya n'anya ma nyefee ihe niile n'aka ya" na John 5: 22-23, "Nna anaghị ekpe onye ọ bụla ikpe, kama o nyela Ọkpara ikpe niile, nwere ike sọpụrụ Ọkpara, dịka ha na -asọpụrụ Nna. ” N'agbanyeghị nke ahụ, Jizọs mere ka o doo anya na ọ bụghị Chineke mgbe ọ sịrị, "Ọ bụrụ na m enye onwe m otuto, otuto m abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụ Nna m na -enye m otuto, onye ị na -ekwu maka ya, 'Ọ bụ Chineke anyị.' ”(Jọn 8:54)
Mkpughe na -enye nkọwa ndị dị mkpa banyere otu esi amata Jizọs na ihe gbara ya gburugburu na -eto ya na nsọpụrụ ya. A kọwara Jizọs nke mbụ n'okwu mmalite (Mkpughe 1: 5-6) dị ka "onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na-achị ndị eze n'ụwa." na mgbe ahụ n'amaokwu nke 6 dị ka "onye hụrụ anyị n'anya wee jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị wee mee anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya." Nke a bụ njirimara nke Jizọs dịka Mesaya ahụ e buliri elu bụ onye na -ejere Chineke ozi. Ekwuputara nke a na Nkpughe 5: 6-14, ebe n'amaokwu 9-10, a na-agwa Nwa Atụrụ abụ n'abụ, "Egburu gị, site na ọbara gị gbapụta ndị mmadụ maka Chukwu… chineke anyị, ha ga -abụkwa eze n'elu ụwa. " Rịba ama na a kpọghị nwa atụrụ ahụ dịka Chukwu. N'ikpeazụ n'amaokwu nke 13, ihe niile e kere eke na -asị "Onye nọ ọdụ n'ocheeze ahụ na Nwa Atụrụ ahụ ka ngọzi na nsọpụrụ na otuto na ike dị ruo mgbe niile ebighị ebi!" N'ọnọdụ a, a na -ahụ Chineke nke nọ n'ocheeze ahụ site na Nwa Atụrụ ahụ mana a na -asọpụrụ ma na -eto ha abụọ. Nke a kwekọrọ na mkpọsa nke ịbụ otu Chineke, Nna, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst (1 Ndị Kọrịnt 8: 5-6).
Aisaia 45: 22-23 (ESV), "ikpere niile ga-egburu m, ire ọ bụla ga-a swearụ iyi ikwesị ntụkwasị obi."
22 “Tụgharịa bịakwute m ka a zọpụta gị, nsọtụ niile nke ụwa! N'ihi na abụ m Chineke, ọ dịghịkwa Chineke ọzọ dị. 23 Eji m Onwe m swornụọ iyi; okwu nke na -alaghachighị n'ọnụ m apụta n'ezi omume. 'Ọ bụ m ka ikpere niile ga -egburu, ire ọ bụla ga -a swearụ iyi. '
Ndị Rom 14:11, ikpere niile ga -egbu ikpere, ire ọ bụla ga -ekwupụtara Chineke
11 n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ,Mu onwem nādi ndu, ka Onye -nwe -ayi kwuru, ikpere nile gākpọ isi ala nye m, ire ọ bula g shallkwuputa kwa Chineke. "
Ndị Filipaị 2: 8-11 (ESV), ikpere niile ga-ehulata, ire ọ bụla ga-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị
8 Ebe achọtara ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ, ọbụnadị ọnwụ n'obe. 9 Ya mere, Chineke ebuliela ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile, 10 ka ọ bụrụ n'aha Jizọs ka ikpere ọbụla gbuo ikpere n'ala, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, 11 na ire nile na -ekwupụta na Jisus Kraịst bụ Onye -nwe, ka e were nye Chukwu Nna.
John 3: 35-36 (Nna) enyefeela ihe niile n'aka
35 Nna m hụrụ Ọkpara ya n'anya ma nyefee ihe niile n'aka ya. 36 Onye kwere n'Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighi ebi; onye ọ bụla adịghị rube isi Ọkpara ahụ agaghị ahụ ndụ, mana iwe Chineke na -adịkwasị ya.
John 5: 22-23 (NIV), Nna enyela Ọkpara ikpe niile
22 n'ihi na Nna anaghị ekpe onye ọ bụla ikpe, kama o nyela Ọkpara ikpe niile, 23 ka mmadụ niile wee sọpụrụ Ọkpara, dịka ha na -asọpụrụ Nna.
Onye na -adịghị asọpụrụ Ọkpara anaghị asọpụrụ Nna ya nke zitere ya.
Jọn 8:54 Ọ bụrụ na m na -enye onwe m otuto, otuto m abụghị ihe ọ bụla
John 15:10 (Mb) Debe ihe m nyere n'iwu dịka m debere iwu nke Nna m
10 Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n'iwu, unu ga -anọgide n'ịhụnanya m, dịka m debere iwu Nna m wee nọrọ n'ịhụnanya ya..
Ọrụ 5: 30-31 (ESV), Chineke buliri Jizọs elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta
30 Chineke nna nna anyị hà kpọlitere Jizọs n'ọnwụ, onye i gburu n'osisi n'elu osisi. 31 Chineke buliri ya elu n'aka nri ya dịka Onye ndu na onye nzọpụta, inye Izrel nchegharị na mgbaghara mmehie.
Mkpughe 1: 5-6 (ESV), Jizọs Kraịst, onye na-achị ndị eze n'ụwa
5 na site n'aka Jizọs Kraịst, onye àmà kwesịrị ntụkwasị obi, onye mbụ n'ime ndị nwụrụ anwụ, onye na -achị ndị eze n'ụwa. Nke onye hụrụ anyị n'anya ma jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị 6 me -kwa -ra ayi ala -eze, ndi -nchu -àjà nye Chineke na Nna -Ya, ka otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
Mkpughe 5: 6-14 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), nye onye ahụ nọ ọdụ n'ocheeze ahụ na Nwa Atụrụ ahụ
6 na n'etiti ocheeze ahụ na ihe anọ ahụ dị ndụ na n'etiti ndị okenye ahụrụ m Nwa Atụrụ ka ọ na -eguzo dịka a ga -asị na e gbuola ya, nke nwere mpi asaa na anya asaa, nke bụ mmụọ asaa nke Chineke zitere n'ime ụwa niile. 7 O wee gaa were akwụkwọ mpịakọta ahụ n'aka nri nke onye ahụ nọ ọdụ n'ocheeze ahụ. 8 Mgbe o were akwụkwọ mpịakọta ahụ, ihe anọ ahụ dị ndụ na ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ dara n'ihu Nwa Atụrụ ahụ, onye ọ bụla na-ejide ụbọ akwara, na iko ọlaedo juru n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, nke bụ ekpere ndị nsọ. 9 Ha wee bụọ abụ ọhụrụ, na -asị, “I kwesiri ka ị were akwụkwọ mpịakọta ahụ mepeekwa akara ya, n'ihi na egburu gị, ọ bụkwa site n'ọbara gị ka ị gbapụtara ndị mmadụ maka Chukwu site n'ebo niile na asụsụ niile na ndị mmadụ na mba niile, 10 i we me ha ka ha buru ala -eze na ndi -nchu -àjà nye Chineke -ayi, ha ga -achịkwa ụwa. ”
11 Mgbe ahụ, m lere anya, wee nụ gburugburu ocheeze ahụ na ihe ndị ahụ dị ndụ na ndị okenye olu ọtụtụ ndị mmụọ ozi, ọnụ ọgụgụ nke iri puku kwuru iri puku na puku kwuru puku. 12 na -ekwu n'oké olu, "Kwesịrị ekwesị bụ Nwa Atụrụ ahụ e gburu egbu, ịnata ike na akụ na ụba na amamihe na ume na nsọpụrụ na otuto na ngọzi! "
13 M wee nụ ihe niile e kere eke nọ n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa na n'oké osimiri, na ihe niile dị n'ime ha, na -asị,Nye onye ahụ nọ ọdụ n'ocheeze ahụ na Nwa Atụrụ ahụ bụrụ ngọzi na nsọpụrụ na otuto na ike ruo mgbe niile! " 14 Ihe anọ ahụ dị ndụ wee sị, “Amen!” ndi -okenye we da n'ala kpọ isi ala.
“Onye anyị sitere n'aka ya” = onye anyị na -esi enweta nzọpụta na ihe nketa n'alaeze Chineke
Mgbe Jọn na-ekwu ngọzi “Amara dịrị gị na udo” nke Mkpughe 1: 4-8, ọ na-akpọ ndị otu atọ gụnyere (1) site n'aka onye dị adị na onye dị na onye ga-abịa, (2) site na mmụọ asaa ndị ahụ n'ihu ocheeze ya, na (3) si n'aka Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi. “Onye dị adị na onye dị adị na onye na-abịa” n'amaokwu nke 4 dị iche na Jizọs onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi nke amaokwu 5-7. Dị ka egosiri na eserese dị n'okpuru, amaokwu nke 5-7 metụtara Jizọs ebe amaokwu nke 4 na amaokwu 8 gbasara onye dị adị na onye bụ onye na-abịa, Chineke na Nna Jizọs. Yabụ na ọ bụ Onyenwe anyị Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile ka a na -akpọ Alfa na Omega na ọnọdụ a (ọ bụghị Jizọs onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi). E kwesịkwara ịrịba ama na Jizọs mere anyị “ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya” nakwa na Chineke na Nna ya bụ Onyenwe anyị Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile.
E mechara tinye “Alfa na Omega, onye mbụ na onye ikpeazụ” na Mkpughe 1:11. Ọ bụghị n'ihe odide dị oke mkpa na -atụgharị uche n'ihe odide Greek mbụ. Ọ dịghịkwa na ederede Ọtụtụ na -anọchite anya ọdịnala Koine nke ọma. Nke a bụ n'ụzọ doro anya interpolation nke agbakwunyere mgbe e mesịrị. Maka nke a, ọtụtụ ntụgharị asụsụ ọgbara ọhụrụ anaghị etinye nke a. Eziokwu a bụ nnukwu ihe atụ nke etu, n'agbanyeghị ọbụbụ ọnụ nke Mkpughe 22: 18-19, akwụkwọ nke Agba Ọhụrụ emebiwo n'ụzọ dị iche iche iji kwado ozizi "Ọtọdọks". Hụkwuo na https://kjviscorrupt.com
Mkpughe 1: 10-11 (ESV), na-ejikọghị ọnụ
10 Anọ m n'ime mmụọ n'ụbọchị Onyenwe anyị, m wee nụ olu n'azụ m ka ọ na -ada ụda dị ka opi 11 si"Dee ihe ị na -ahụ n'akwụkwọ wee zigara ya ụka asaa, Efesọs na Smụana na Pagamọm na Taịataịra na Sardis na Filadelfia na Leodisia."
Mkpughe 1: 10-11 (KJV), ya na ntụgharị okwu mgbe e mesịrị
10 Anọ m n'ime mmụọ n'ụbọchị Onyenwe anyị, wee nụ nnukwu olu n'azụ m, dịka nke opi, 11 Na-ekwu, Abụ m Alfa na Omega, onye mbụ na onye ikpeazụ: na, Ihe ị hụrụ, dee n'akwụkwọ, zigara ya ụka asaa dị na Eshia; Efesos, na Smụana, na Pagamọs, na Tayataịra, na Sadis, na Filadelfia, na Leodisia.
Ọtụtụ mgbe, “onye mbụ na onye ikpeazụ” nke dị n'Aịsaịa 44: 6 na Mkpughe 1:17. Agbanyeghị, ndị a bụ akwụkwọ abụọ dị iche iche nwere ọnọdụ abụọ dị iche iche. Aghọtara ihe “nke mbụ na nke ikpeazụ” na ntụaka maka ihe gbara ya gburugburu na ọ nwechaghị ihe ọ pụtara. Na Aịsaịa 44, Chineke, Jehova nke ụsụụ ndị agha bụ “onye mbụ na onye ikpeazụ” n'ihe gbasara ịbụ naanị Chineke. Na Mkpughe 1:17 Jizọs bụ “onye mbụ na onye ikpeazụ” n'ihe banyere ịbụ onye dị ndụ nwụrụ ma dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, nwere mkpịsị ugodi nke ọnwụ na Hedis. N'ihe gbara ya gburugburu, o doro anya na Jizọs bụ “Onye Mbụ na Onye Ikpeazụ” n'echiche nke na ọ bụ ndokwa Chineke maka nzọpụta maka mmadụ niile site na mmalite ruo na njedebe.
Ntụle a kwekọrọ na eziokwu na otu n'ime ihe odide Greek ochie site na narị afọ nke ise, gụrụ “Abụ m ọkpara na onye ikpeazụ” kama ịbụ “onye mbụ na onye ikpeazụ” (Codex Alexandrinus).
Isaiah 44: 6-8 (ESV), ma e wezụga m ọ dịghị chi ọzọ
6 Otú a ka Jehova, bú eze Israel na onye -nbedeaputa -ya, bú Jehova, siri Jehova nke usu nile nke ndi -agha: "Abụ m onye mbụ na abụ m onye ikpeazụ; ma e wezụga m ọ dịghị chi ọzọ. 7 Nye dị ka m? Ka ọ kpọsaa ya. Ka ọ kọọ ma tinye ya n'ihu m, ebe ọ bụ na m họpụtara otu ndị ochie. Ka ha kwupụta ihe gaje ịbịa, na ihe ga -eme. 8 Atụla egwu, atụkwala egwu ọ bụ na agwabeghị m gị site na mgbe ochie wee kwupụta ya? Unu bụkwa ndị akaebe m! A nwere Chineke ma e wezụga m?? Oké Nkume adịghị; Amaghị m otu ọ bụla. ”
Isaiah 48: 12-13 (ESV), Ọ bụ aka m tọrọ ntọala ụwa
12 “Gee m ntị, gị Jekọb, na Izrel onye m kpọrọ! Mu onwem bu Ya; Mu onwem bu onye mbu, mu onwem bu kwa onye ikpe azu. 13 Aka m tọrọ ntọala ụwa, aka nri m na -agbasakwa eluigwe; mb whene m'kpọkuru ha, ha n forthguzo ọtọ n'otù.
12 M wee tụgharịa hụ olu ahụ na -agwa m okwu, mgbe m tụgharịrị, ahụrụ m ihe ndọba oriọna ọlaedo asaa, 13 na n'etiti ihe ndọba oriọna otu dị ka nwa nke mmadụ, yi uwe mwụda dị ogologo wee kee eriri ọlaedo n'obi ya. 14 Ntutu isi ya dị ọcha, dị ka owu ọcha, dị ka snow. Anya ya dị ka ire ọkụ, 15 Ụkwụ ya dị ka ọla na -enwu enwu, nke a nụchara anụcha n'ime ọkụ, olu ya dịkwa ka mkpọtụ nke ọtụtụ mmiri. 16 N'aka nri ya, o jide kpakpando asaa, site n'ọnụ ya ka mma agha dị nkọ nke nwere ihu abụọ siri bịa, ihu ya dịkwa ka anyanwụ na-acha n'ike n'ike. 17 Mgbe m hụrụ ya, m dara n'ala n'ụkwụ ya dị ka onye nwụrụ anwụ. Ma o bikwasịrị m aka nri ya, sị, “Atụla egwu. Abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ, 18 na nke dị ndụ. M nwụrụ, ma lee, m dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, enwekwara m mkpịsị ugodi nke ọnwụ na Hedis.
Mkpughe 1: 17b-18 (Codex Alexandrinus, narị afọ nke ise), “ọkpara na onye ikpeazụ”
“Atụla egwu, Abụ m ọkpara na onye ikpeazụ, na nke dị ndụ. M nwụrụ, ma lee, m dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, enwekwara m mkpịsị ugodi nke ọnwụ na Hedis. ”
"Abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ", Nkọwa REV
Nkebi ahịrịokwu a, “onye mbụ na onye ikpeazụ,” bụ aha e ji mee ihe ugboro ise na Bible, ugboro abụọ n'Aịsaịa nke Chineke (Aịzaya 44: 6; 48:12), na ugboro atọ na Mkpughe nke Ọkpara ahụ (Mkpu. 1:17; 2: 8; 22:13). Ndị na -akwado Atọ n'Ime Otu na -eche mgbe ụfọdụ na ebe ọ bụ na otu aha ahụ gbasara ma Nna ma Ọkpara, ha abụọ ga -abụ Chineke. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe Akwụkwọ Nsọ kwadoro nke ga -adabere n'echiche ahụ. Mgbe a na -amụ Akwụkwọ Nsọ dum, anyị nwere ike ịhụ na ejiri otu aha ahụ mee ihe maka Chukwu, Kraịst na mmadụ. Ọmụmaatụ gụnyere "Onyenwe anyị," "Onye nzọpụta," na "Eze ndị eze." Ọ bụrụ na utu aha ndị ọzọ metụtara Chineke, Kraịst na mmadụ na -emeghị ha niile ka ha bụrụ “otu Chineke,” yabụ na ọ nweghị ihe ga -eche na aha a pụtara Chineke na Jizọs bụ otu Chukwu belụsọ na Akwụkwọ Nsọ gwara anyị otu a, nke ọ na -eme. ọbụghị.
N’ime Testament Ochie, Chineke bụ n’ezie “onye mbụ na onye ikpeazụ.” E nyeghị aha aha ya kpọmkwem, yabụ ndị ọkà mmụta na -arụrịta ụka, mana ọ dị ka enyere isi ihe ọ pụtara na Isaiah 41: 4, ebe Chineke kwuru na Ọ kpọpụtala ọgbọ mmadụ, ma soro nke mbụ n'ime ha na onye ikpeazụ n'ime ha. Isaiah 41: 4 na -ekwu, "Onye mere nke a wee mechaa ya, na -akpọ ọgbọ niile site na mmalite? Mụ onwe m, Jehova, na onye mbụ n'ime ha na ndị ikpeazụ, abụ m ya. ” Ya mere, Bible jikọtara nkebi ahịrịokwu ahụ “onye mbụ na onye ikpeazụ” na ịkpọ ọgbọ.
Ọ bụ ezie na Chineke bụ onye kpọpụtara ọgbọ n'ime Agba Ochie, O nyela Ọkpara ya ikike ahụ ugbu a. Ya mere, ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara eji kpọọ Onyenwe anyị Jizọs “onye mbụ na onye ikpeazụ” n'akwụkwọ Mkpughe. Ọ ga -abụ Jizọs Kraịst ga -akpọpụta ọgbọ nke ndị mmadụ site n'ili ka ha banye na ndụ ebighị ebi. Chineke nyere Jizọs ikike ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ (Jọn 5: 25-27). Olu ya ga-akpọlite ​​Ndị Kraịst niile nwụrụ anwụ (1 Tesa. 4: 16-17), ọ ga-agbanwekwa ahụ anyị ka ọ bụrụ ahụ ọhụrụ dị ebube (Fil. 3: 20-21). Agbanyeghị, ọbụlagodi mgbe Jizọs kwuru na ya nwere ikike ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ, ọ dịghị mgbe o kwuru na ya nwere ikike ahụ na ya n'ihi na ọ bụ Chineke. Ọ na -ekwukarị na Nna ya nyere ya ikike. Mgbe ọ na -akụzi maka ikike ya, Jizọs Kraịst doro anya nke ọma banyere onye bụ onye isi kachasi ike: “Ọkpara enweghị ike ime ihe ọ bụla n'onwe ya…. Nna… nyere Ọkpara ahụ inwe ndụ n'ime onwe ya. O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe ”(Jọn 5:19, 22, 26-27). Ọ bụrụ na Jizọs nwere ikike ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ n'ihi na ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ Chineke, ọ dịghị mgbe o kwuru otú ahụ. Ọ sịrị na ya nwere ikike n'ihi na Nna ya nyere ya. Site n'ikike ịkpọlite ​​ọgbọ, aha a jikọtara ya na ịdị adị nke ọgbọ, yabụ nke ahụ bụ isi ihe kpatara na a kpọlitere Jizọs Kraịst "onye mbụ na onye ikpeazụ."
Ụzọ ọzọ anyị nwere ike isi mata na utu aha ahụ bụ “onye mbụ na onye ikpeazụ” emeghị ka Jizọs bụrụ Chineke bụ naanị otú Jizọs si were ya. Rịba ama ihe amaokwu dị na Mkpughe kwuru: “Abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ, na Onye dị ndụ, m wee nwụọ, ma, lee! Anọ m ndụ ruo mgbe niile, enwekwara m mkpịsị ugodi nke ọnwụ na nke ili ”(Mkpu. 1:17, 18). Patrick Navas kwuru, sị:
“Jizọs bụ onye 'nwụrụ anwụ' mana ọ dị ndụ ugbu a…. N'ọnọdụ abụọ n'ime atọ ebe Jizọs kọwara onwe ya dị ka 'Onye Mbụ na Onye Ikpeazụ' n'akwụkwọ Mkpughe, e kwuru okwu a na ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya. … Ọ bụrụ na 'Onye Mbụ na Onye Ikpeazụ' n'okwu a pụtara, ma ọ bụ n'ikpeazụ na -egosi, 'Chineke (Onye Pụrụ Ime Ihe Niile), Onye Ebighị Ebi,' n'ụzọ dị a wouldaa ka ọ ga -abụ ihe ezi uche dị na ya ka Jizọs kwuo, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, 'Abụ m Chineke ebighị ebi , M nwụrụ, ma dị ndụ ọzọ '? Kedu ihe ijuanya na ọ gaghị ekwe omume - ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume - ọ gaara abụ na Chineke nwụrụ ma ọ bụ kwuo na ọ nwụrụ? Ọbụnadị ọtụtụ ndị na -akwado Atọ n'Ime Otu na -akụzi na 'Chukwu,' ma ọ bụ 'ọdịdị Chukwu/akụkụ nke Kraịst,' anwụghị, n'ụzọ ọ bụla. … Ya mere, ndị na -akwado Atọ n'Ime Otu ga -arụrịta ụka, n'ikpeazụ, na Jizọs na -akọwa onwe ya dị ka Chineke site n'ịkpọ onwe ya 'Onye Mbụ na Onye Ikpeazụ' na, ozugbo, gbanwee, ma ọ bụ kwuo okwu na ya, 'agwa mmadụ,' n'ihi eziokwu na ọ nwụrụ. Nke a ga -abụ ihe ngosi nke 'igwu egwu ngwa ngwa' na Akwụkwọ Nsọ. ” (Eziokwu nke Chukwu ma ọ bụ ọdịnala mmadụ, p. 585, 586).
Eziokwu ahụ bụ na mgbe Jizọs jiri utu aha “onye mbụ na onye ikpeazụ” ọ jikọtara ya na ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya na -egosi anyị na, na -abụghị ịzọrọ ịbụ Chineke, ọ gosiri etu, dịka Ọkpara nke rubere Nna ya isi ruo mgbe obe na ọnwụ, Jizọs nwere ikike ugbu a site na Chineke ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ. Anyị nwere ike ịhụ nke a ọkachasị ebe ọ gwụsịrị Rev 1:18 site n'ikwu na ya nwere mkpịsị ugodi ọnwụ na ili, nke ga -abụ ihe ezi uche dị na ya ikwu ma ọ bụrụ na ịnwe igodo ndị ahụ abụghị akụkụ nke ọdịdị ya. Ọ bụrụ na ọ bụ Chineke, gịnị kpatara ị ga -eji kwuo na o nwere mkpịsị ugodi ọnwụ na ili. N'ezie Chineke nwere mkpịsị ugodi ndị ahụ, mana Ọkpara Chineke nke mmadụ ga -enwe naanị ma ọ bụrụ na Chineke Nna nyere ya ya.
Ọtụtụ n'ime nkọwa dị n'elu ewepụtara na REV (Revised English Version) Nkọwa Bible, https://www.revisedenglishversion.com/Revelation/chapter1/17, ejiri ya na ikike, Mmụọ na Eziokwu Fellowship International
Jizọs ịbụ “onye mbụ na onye ikpeazụ” pụtara n'echiche na nzọpụta adịghị n'ime onye ọ bụla ọzọ na àjà ya bụ otu ugboro. Dị ka ọ na-ekwu na Ndị Hibru 10: 12-13, "Kraịst chụrụ otu aja maka mmehie ruo mgbe niile, n'ihi na site na mgbama mgbapụta, o mere ka ndị a na-edo nsọ zuo oke ruo mgbe niile." Ọ na -ekwukwa na Ndị Hibru 10:10, "Edoro anyị nsọ site n'inye anụ ahụ Jizọs Kraịst naanị otu ugboro". Anyị na -ahụ Jizọs, e kpubere ya ebube na nsọpụrụ maka nhụjuanya nke ọnwụ, ka o wee site n'amara Chineke detụ ọnwụ maka onye ọ bụla (Ndị Hibru 2: 9). Chineke, onye ihe niile dị n'aka ya na onye ọ bụ ya, site n'iweta ọtụtụ ụmụ n'ebube, kwesịrị ime ka onye nzọpụta anyị zuo oke site na nhụjuanya (Ndị Hibru 2:10). N'ihi na onye na -edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi (Ndị Hibru 2:11).
Ọzọkwa, Chineke burula ụzọ kpebie ka anyị na-eme ka onyinyo nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnne (Ndị Rom 8:29, 1Ts 5: 9-10). Kraịst bụ mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra (1 Ndị Kọrịnt 15: 20-22). Ihe omimi nke ebumnuche Chineke bụ ihe o setịpụrụ n'ime Kraịst dịka atụmatụ maka oge zuru oke iji jikọta ihe niile n'ime ya (Ndị Efesọs 1: 9-10). Atụmatụ zoro ezo maka Chineke n'ime afọ niile bụ amamihe dị iche iche nke Chineke-ebumnobi ebighi ebi nke o mezuru na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị (Ndị Efesọs 3: 9-11). Nzoputa adighikwa n'onye ozo, n'ihi na odighi aha ozo di n'okpuru elu igwe nke enyere n'ime mmadu, nke aghaghi iji zoputa anyi (Olu 4:12). Ọ bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ (Ọrụ 10:43). Oge awa na -abịa mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ (Jọn 5:26). O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ (Jọn 5:27). Otu Chineke dị, na otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile (1Tim 2: 5-6). Nna m hụrụ Ọkpara ya n'anya ma nyefee ihe niile n'aka ya (Jọn 3:35).
Ndị Hibru 2: 9-11 (ESV), ọ nwere ike detụ ọnwụ ire maka mmadụ niile
9 Ma anyị na -ahụ onye e mere ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi, ya bụ Jizọs, e kpubere ya otuto na nsọpụrụ n'ihi ahụhụ ọnwụ, nke mere na site na amara nke Chineke Ọ nwere ike detụ ọnwụ ire maka mmadụ niile. 10 N'ihi na o kwesiri ka onye ahu, onye ihe nile di n'aka ya, site n'iweta ọtụtụ ụmụ n'ebube, kwesịrị ime onye nzọpụta ha zuru oke site na nhụjuanya. 11 Maka onye na -edo nsọ na ndị edoro nsọ ha niile nwere otu ebe.
Ndị Hibru 10: 10-14 (ESV), site n'inye ahụ Jizọs Kraịst otu ugboro naanị-ruo mgbe niile
10 Ọ bụkwa site na ọchịchọ ahụ ka e ji doo anyị nsọ site n'onyinye nke Jisus Kraist churu otu ugboro. 11 Onye nchụàjà ọ bụla na -eguzo kwa ụbọchị na -ejere ya ozi, na -achụ otu àjà ahụ ugboro ugboro, nke na -enweghị ike iwepụ mmehie. 12 Ma mgbe Kraịst nyere maka oge niile otu àjà maka mmehie, ọ nọdụrụ ala n’aka nri Chineke, 13 na -eche site n'oge ahụ ruo mgbe a ga -eme ndị iro ya ihe mgbakwasị ụkwụ ya. 14 N'ihi na site na otu onyinye o mewo ka ndị a na -edo nsọ zuo oke ruo mgbe niile.
Ọtụtụ ndị na -arịọ mgbaghara na -eche na “Alfa na Omega” bụ aha nke na -emetụta naanị Onyenwe anyị Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile. Agbanyeghị na nke a bụ naanị ụzọ ọzọ isi kwuo “nke mbụ na nke ikpeazụ” ma ọ bụ “mmalite na njedebe” usoro ndị a yiri ka ha na -agbanwe agbanwe na ụzọ isi kwuo otu ihe. Nke a na -agba akaebe n'eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ ihe odide oge ochie nwere usoro okwu dị iche iche maka Mkpughe 22:13. “Alfa na Omega” metụtara Kraịst n'otu echiche ahụ nke “Onye mbụ na Onye Ikpeazụ” metụtara Kraịst (lee nkọwa zuru ezu na ngalaba nke bu ụzọ, Mbụ na Ikpeazụ, Mkpughe 1:17). Enweghị ihe mere ị ga -eji kwenye na “Alfa na Omega” metụtara naanị Chukwu yana dịka echiche na aha ndị ọzọ nwekwara ike imetụta Kraịst. Otu ihe na -adabaghị adaba bụ iche na n'ihi na etinyere aha ma ọ bụ echiche gbasara Chineke, na ọ bụ naanị maka Chineke ka ọ dị.
13 Abụ m Alfa na Omega, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite na ọgwụgwụ. ”
“Alfa na Omega”, Nkọwa REV
Otu nkọwa na -ewu ewu banyere Mkpughe (Bullinger) na -ekwu na nkebi ahịrịokwu ahụ “bụ nke ndị Hibru, nke ndị Juu na -ekwu okwu n'oge ochie na -ejikarị akọwa ihe niile site na mmalite ruo na njedebe; ịmaatụ, 'Adam mebiri iwu niile site na Aleph ruo Tau' (Jalk. Reub., fol. 17.4). ” Nke ahụ ga -eme ka okwu ahụ bụrụ okwu okwu. Uche ndị ọkammụta kacha mma kwubiri na ahịrịokwu ahụ nwere ihe gbasara ịmalite na imecha ihe, ma ọ bụ ihe niile. Norton dere na okwu ndị a, “na -egosi mmezu nke ebumnuche ya; na ihe ọ malitere ka ọ ga -aga n'ihu ruo mmezu ya ”(A Statement of Reasons for Not Believing the Doctrines of Trinitarians; 1877, p. 479, 480).
Ebe ma Chineke na Jizọs Kraịst bụ “Alfa na Omega” n'ụzọ nke ha, enwere ezi ihe mere a ga -eji kwenye na aha ahụ nwere ike ịbara ha abụọ uru, ọ nweghịkwa ezigbo ihe kpatara aha a ji mee ka ha abụọ bụrụ “otu Chineke. . ” Utu aha ahụ bụ “Onyenwe anyị,” “Onye nzọpụta,” na “eze nke ndị eze, na -emetụta ma Chineke ma Kraịst, yana ndị ọzọ. Dị ka ọ dị “Onyenwe anyị,” “Onye nzọpụta” na “Eze nke ndị eze,” utu aha a dabara ha abụọ. N'ezie, Chineke bụ mmalite na ọgwụgwụ nke ihe niile, ebe Kraịst bụ mmalite na ọgwụgwụ n'ihi na ọ bụ ọkpara site na ndị nwụrụ anwụ, Onye Chepụtara na Onye Mmecha nke okwukwe, Nwoke nke Chineke ga -esite na ya kpee ụwa ikpe, na onye kachasị. nke ọgbọ ọhụrụ na -abịa.
(Revised English Version (REV) Nkọwa Bible, https://www.revisedenglishversion.com/Rev/1/8, ejiri ikike mee ihe, Mmekọrịta Mmụọ na Eziokwu)
"Mbụ na ikpeazụ"
Hụ ngalaba nke mbụ na -ekwu maka “onye mbụ na onye ikpeazụ” na Mkpughe 1:17.
“Mmalite na ọgwụgwụ”, Nkọwa REV
"Mmalite na ọgwụgwụ." Nkebi ahịrịokwu pụtara ugboro abụọ: ebe a na Mkpughe 22:13. E nyeghị nkebi ahịrịokwu ahụ “mmalite na ọgwụgwụ” nke ọma. Ndị ọkà mmụta na -enye nkọwa dị iche iche nkebi ahịrịokwu ahụ, mana ihe ọ pụtara ga -ejikọrịrị ya na echiche nke “Alfa na Omega” na “Mbụ na Onye Ikpeazụ” n'ihi na ejikọtara aha ndị a ọnụ (cp. Nkpughe 22:13). Anyị ahụla n'ọmụmụ nke aha ahụ bụ "Alfa na Omega" na ọ na -ezo aka na mmalite na imecha ihe, anyị hụkwara site n'aha “Onye mbụ na Onye Ikpeazụ” (Mkpu. 1:17) na Kraịst ga -akpọlite Ọgbọ ndị mmadụ ruo ndụ ebighị ebi. O doro anya ihe mere a ga -eji kpọọ Kraịst “mmalite na ọgwụgwụ” ya na echiche ndị a. Ọ bụ onye e buru ụzọ mụọ site na ndị nwụrụ anwụ, ọ ga -abụkwa onye ga -akpọpụta ndị ikpeazụ n'ili ha, ọ bụ ya bụ Onye chepụtara na onye mmecha nke okwukwe, ọ bụ Nwoke ahụ ka Chineke ga -eji kpee ụwa ikpe na ọ bụ ya onye ga -ekepụta ma mee ka afọ ndị na -abịa abịa mezuo (lee nkọwa na Hib 1:10). Enweghị ezi ihe mere ị ga -eji chee na Jizọs bụ Chineke naanị n'ihi aha, "Mmalite na Ọgwụgwụ". Ọ bụ ihe a na -ahụkarị bụ na ndị nwere otu ọnọdụ na -eji otu aha.
(Revised English Version (REV) Nkọwa Bible, https://www.revisedenglishversion.com/Rev/21/6, ejiri ikike mee ihe, Mmekọrịta Mmụọ na Eziokwu)
Aisaia 9: 6 bụ ederede Agba Ochie ọzọ a na -ejikarị atụ aro na Jizọs bụ Chineke n'ihi ihe ndị a ga -akpọ ya. N'ileba anya na okirikiri a, ọ ga -edo anya na isiokwu nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ a abụghị Chineke n'onwe ya kama ọ bụ Mesaịa ahụ.
Isaiah 9: 6-7 (ESV), A mụụrụ anyị otu nwa, nyekwara anyị otu nwa nwoke
6 N'ihi na amuworo anyị otu nwa, nye anyị otu nwa nwoke; na gọọmentị ga-adị n'ubu ya, na aha ya ga -akpọ Onye ndụmọdụ dị ebube, Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, Nna Ebighị Ebi, Onyeisi Udo. 7 Ịba ụba nke ọchịchị ya na nke udo agaghị enwe njedebe, n'ocheeze Devid na n'elu alaeze ya, ime ka o guzosie ike na ịkwado ya n'ikpe ziri ezi na n'ezi omume malite ugbu a gaa n'ihu. Ịnụ ọkụ n'obi nke Jehova nke usu nile nke ndi -agha g willme nka.
Isaiah 9: 6-7 (NETS Septuagint), amụrụ anyị otu nwa, nyekwara anyị otu nwa nwoke.
n'ihi na amụrụ anyị otu nwa, nwa nwoke nyekwara anyị, onye ọbụbụeze ya dị n'ubu ya, a na -akpọkwa ya onye ozi nke Onye Ndụmọdụ Dị Ukwuu, n'ihi na M'g willme ka udo biakwasi ndi -isi, udo na ezi -okwu gādiri ya. Ọchịchị ya dị ukwuu, udo ya enweghị oke na ocheeze Devid na alaeze ya, ime ka ọ gaa nke ọma na ịkwado ya n'ezi omume na ikpe site ugbu a gaa n'ihu ruo mgbe ebighị ebi Ekworo nke Onye -nwe Sabaoth ga -eme ihe ndị a.
"A mụụrụ anyị otu nwa, nyekwara anyị nwa nwoke", Nkọwa REV
Aịsaịa 9: 6 na -enye anyị ihe kpatara na, n'amaokwu ndị bu ụzọ, "a gaghị enwekwa ọchịchịrị maka ndị nọ na nhụjuanya" (Aịsaịa 9: 1), ndị jere ije n'ọchịchịrị ga -ahụ nnukwu ìhè (Isaiah 9: 2). 9) ndị mmadụ ga -a rejoiceụrị ọ (ụ (Aịsaịa 3: 9), a ga -agbaji yoke nke ibu arọ ha na mkpanaka nke onye na -emegbu ha (Aịsaịa 4: 9), a ga -agbakwa uwe e ji alụ agha ọkụ (Aịsaịa 5: 9). Ọ bụ n'ihi na Mezaịa ahụ ga-abịa chịwa ụwa n'ezi omume ruo mgbe ebighị ebi (Aịsaịa 6: 7-XNUMX).
Ihe odide Hibru na -agụ, “a mụrụ nwa… a nyela nwa nwoke.” N'asụsụ Bekee anyị ga -asị, "a ga -amụ nwa," n'ihi na ọmụmụ Jizọs Kraịst ka dị ihe karịrị afọ 700 n'ọdịnihu. Ederede Hibru bụ ihe atụ nke akpaala okwu Hibru nke amụma zuru oke, nke na -eme mgbe a na -ekwu maka ihe ga -eme n'ọdịnihu dị ka a ga -asị na o meelarị n'ihi na ọ ga -eme. Ụkpụrụ amụma ahụ zuru oke bụ ụzọ ime ka ndị mmadụ mara na ihe ga -eme n'ọdịnihu adịghị enwe obi abụọ mana ọ ga -eme.
"Ọchịchị ga -adịkwa n'ubu ya", Nkọwa REV
Aisaia 9: 6-7 bụ otu n'ime ọtụtụ amaokwu dị n'Agba Ochie nke na-egosi Mesaya ahụ ka amụrụ ya wee too ka o bibie ndị ajọ omume wee chịa ụwa n'ezi omume n'ekwughị ihe ọ bụla gbasara ọnwụ ya, mbilite n'ọnwụ ya, nrigo ya, ma ọ bụ Oké mkpagbu na agha Amagedọn. Enwere ọtụtụ Akwụkwọ Nsọ n'Agba Ochie nke na-ekwu maka ọbịbịa Kraịst na ịbọ ọbọ Chineke n'isi ndị ajọ omume dịka a ga-asị na ha ga-eme n'otu oge (Aịza. 9: 6-7; 11: 1-9; 61: 1) -3; Maịka 5: 2; Zek. 9: 9-10; Mal. 3: 1-3; 4: 1-3).
“Chineke Nke bụ Dike”, Nkọwa REV
A na -atụgharịkarị ahịrịokwu ahụ dị ka “Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile” n'ọtụtụ Bible Bekee. N'ezie, "chi dị ike" agaghị abụ ntụgharị ọjọọ ma ọ bụrụ na ndị mmadụ achọpụta na n'asụsụ Hibru okwu ahụ bụ "chi/Chukwu" (Elohim; nwekwara El) nwere ngwa dị ukwuu karịa ka ọ dị n'asụsụ Bekee. Ndị maara asụsụ asụsụ Semitic maara na a pụrụ ịkpọ nwoke ji ikike Chineke eme ihe “chi.” Nsụgharị ọzọ nke Aịsaịa 9: 6 maka onye na -agụ Bekee ga -abụ “dike,” ma ọ bụ “dike Chineke.” Ma Martin Luther na James Moffatt sụgharịrị ahịrịokwu ahụ dị ka “dike Chineke” n'ime Bible ha.
Ọmụmaatụ doro anya na -egosi na enwere ike iji okwu a sụgharịrị ịbụ '' Chineke '' n'Aịsaịa 9: 6 mee ihe maka ndị ọchịchị dị ike n'ụwa bụ Ezikiel 31:11, nke na -ezo aka na eze Babilọn. A pụrụ ịhụ adịghị ike nke Atọ n'Ime Otu nke ndị sụgharịrị ọtụtụ nsụgharị Bekee site n'iji Aịsaịa 9: 6, ebe a sụgharịrị okwu Hibru e "Chineke" na Ezikiel 31:11, ebe a na -asụgharịkarị el dị ka "onye na -achị achị." Ma okwu el na -ezo aka na Chineke ma ọ bụ onye ọchịchị mmadụ, a ga -ekpebi ya site na onodu, na Mesaịa ahụ abụghị Chineke. Ọ bụrụ na nanị ịkpọ Mesaịa el mere ya Chineke, mgbe ahụ eze Babilọn ga -abụkwa Chineke. Aịsaịa na -ekwu maka Mesaịa nke Chineke wee kpọọ ya onye ọchịchị dị ike, nke ọ ga -abụ n'ezie.
Nkebi ahịrịokwu dị n'Aịsaịa 9: 6 nke ọtụtụ nsụgharị Bekee na -atụgharị dị ka "Chineke Nke bụ Dike" bụ el gibbor n'asụsụ Hibru. Eji ahịrịokwu ahụ, n'ụdị ọtụtụ, mee ihe Ezikiel 32:21 nke “ndị dike” na ndị dike. NIV sụgharịrị ahịrịokwu ahụ dị na Ezikiel dị ka “ndị isi dị ike,” na KJV na NASB sụgharịrị ya dị ka “onye siri ike n'etiti ndị dike.” Nkebi ahịrịokwu Hibru, mgbe ejiri ya mee ihe na -egosi otu, nwere ike izo aka na otu “onye ndu dị ike” dị ka mgbe ejiri ya mee ihe na ọtụtụ ọ nwere ike ịpụta ọtụtụ “ndị isi dị ike.”
Isaiah 9 etịn̄ aban̄a andikara emi Abasi emekde. Amaokwu mmalite nke isiakwụkwọ ahụ na -ebu amụma banyere oge '' ọchịchịrị agaghị adịkwa maka ndị nọ na nhụjuanya. Agha niile na ọnwụ niile ga -akwụsị, “akpụkpọ ụkwụ ọ bụla nke onye agha na -azọ ụkwụ… na uwe mwụda nke ọbara… Kedu ka nke a ga -esi mee? Isi na -aga n'ihu: "A mụụrụ anyị otu nwa" (Aịsa. 9: 5). Messiah edidi owo emi Abasi eyetde aran. Ọ ga -amalite mgbe ọ bụ nwata, nke bụ n'ezie YHWH, Chineke ebighi ebi, na -agaghị adị. Na ihe onye ọchịchị a ga -etolite ịbụ onye a: “Ọchịchị ga -adị n'ubu ya. A ga -akpọkwa ya Onye Ndụmọdụ Dị Ebube, Dike Dike, Nna nke Oge Na -abịanụ, Onyeisi Udo. ” Ọzọkwa, “ọ ga -abụ eze n'ocheeze Devid (Aịza. 9: 6), nke enweghị ike ikwu maka Chineke. Chineke enweghị ike ịnọdụ n'ocheeze Devid. Mana Mesaịa nke Chineke, “Nwa Devid,” nwere ike (Mat 9:7). Ya mere, inyocha amaokwu a na okirikiri ya na -ekpughe na ọ naghị ekwu maka Chineke n'echiche nke ọnụnọ, kama ọ bụ Mesaịa, nwa Devid na Ọkpara Chineke.
“Chineke Nke bụ Dike” na -ezo aka n'ike na ikike kachasị elu ọ ga -enwe n'alaeze a nke o guzobere ma kwado. Enwere ike ịkpọ ndị nnọchi anya Chineke “Chukwu” dabere n'echiche nke ịbụ ndị nnọchi anya. Mesaịa ahụ abụghị Chineke n'ụzọ nkịtị kama o nwere ikike dị nsọ dịka onye nnọchi anya Chineke họpụtara ka ọ chịa ụwa n'ezi omume.
Septuagint na -agụ “Onye Ozi nke Ndụmọdụ Dị Ukwuu” kama ịgụ “Chineke Nke Dị Ike” na “Nna Mgbe Ebighị Ebi”
"Nna ebighi ebi", Nkọwa Rev
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Bible Bekee ọ bụla na -asụgharị Aịsaịa 9: 6. Ebe dị mma iji jide ntụgharị asụsụ nke Aịsaịa 9: 6 dị na ahịrịokwu a, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Bible Bekee niile na -asụgharị dị ka “Nna Ebighị Ebi,” n'ihi na ọ dịghị mgbe a na -akpọ Jizọs "Nna Ebighị Ebi" n'ebe ọ bụla ọzọ n'Akwụkwọ Nsọ. Ọzọkwa, ndị na -akwado Atọ n’Ime Otu na -agọnarị n’ụzọ ziri ezi na Jisọs abụghị “Nna ebighị ebi.” Ọ bụ ozizi bụ isi nke ozizi Atọ n'Ime Otu nke Ndị Kraịst ekwesịghị '' ime ka ndị mmadụ nwee mgbagwoju anya ma ọ bụ kewaa ihe '' (Okwukwe Athanasian). Yabụ, ọ bụrụ na “Nna ebighi ebi” bụ ntụgharị ziri ezi nke ederede Hibru, mgbe ahụ Ndị Kraịst Atọ n'Ime Otu nwere ezigbo nsogbu. Agbanyeghị, “Nna ebighi ebi” bụ ntụgharị asụsụ na -ezighi ezi.
Okwu Hibru a sụgharịrị ịbụ '' afọ '' (ma ọ bụ '' ebighebi '' n'ọtụtụ Akwụkwọ Nsọ), na -ezo aka n'ihe na -adịte aka ma ọ bụ ruo mgbe ebighi ebi, ma ọ bụ ihe na -adịgide maka afọ ma ọ bụ afọ, nke nwere ike ịbụ nke gara aga ma ọ bụ ọdịnihu. Ya mere, mgbe Habakuk 3: 6 na -ekwu maka ugwu ndị a ga -akụri n'otu oge n'ọdịnihu, a na -akpọ ha "ugwu ochie" na ntụgharị ụfọdụ (NAB; NET), ma ọ bụ site n'ịtụfe ọnụ, "ugwu ebighi ebi" (KJV) ). N’ezie, mgbe ọ na-ekwu maka Chineke ọ pụtara na ọ ga-adị ruo mgbe ebighi ebi, na ọgbọ na-abịanụ bụkwa nke ebighi ebi, n’agbanyeghi na ọ bụrụ na amaokwu a n’Aịsaịa buru n’uche naanị akụkụ mbụ nke ọchịchị Kraịst n’ọdịnihu, mgbe ahụ Ọ ga-adị ogologo ma ọ bụ ọbụna “ogologo ntachi obi. ”Ga -abụ nke ziri ezi karịa.
Ebe Okwu Chineke na -egosi afọ abụọ, ajọ oge dị ugbu a na ọgbọ nke Mesaịa na -abịa, ezigbo ntụgharị bụ na a ga -akpọ Jizọs "nna nke oge [na -abịa]." N’ọdịnala Akwụkwọ Nsọ, onye ọ bụla malitere ihe ọ bụla ma ọ bụ nwee nnukwu mkpa maka ihe a na -akpọ ya “nna” ya. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi na Jabal bụ onye mbụ biri n'ụlọ ntu ma na -azụ anụ ụlọ, Akwụkwọ Nsọ na -ekwu, "ọ bụ nna nke ndị na -ebi n'ụlọikwuu na -azụ anụ ụlọ" (Jen. 4:20). Ọzọkwa, n'ihi na Jubal bụ onye mbụ chepụtara ngwa egwu, a na -akpọ ya "nna nke ndị na -akpọ ụbọ akwara na ọjà" (Jen. 4:21). Akwụkwọ Nsọ anaghị eji “nna” n'echiche nna ma ọ bụ nna ochie n'amaokwu ndị a, n'ihi na ndị ikom abụọ a bụ ụmụ Ken, ma ụmụ ha niile nwụrụ na iju mmiri Noa. A na -eji “Nna” mee ihe n'ịghọta ọdịbendị nke ma onye mbụ mere ihe ma ọ bụ onye dị mkpa n'ụzọ ụfọdụ.
Mesaịa ahụ ga -abụ onye ga -egosipụta afọ na -abịa, kpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ n'ime ya, chịa dị ka eze n'ime ya, yabụ akpọrọ ya "nna nke ọgbọ na -abịanụ." Adam Clarke, onye ụkọchukwu Metọdist a ma ama na onye edemede Clarke's Commentary, kwuru na ihe a na -asụgharịkarị ịbụ “Nna ebighi ebi” kwesịrị ịbụ “Nna nke mgbe ebighị ebi” nke bụkwa ntụgharị asụsụ mara mma. “Nna ebighi ebi” metụtara ya na -eme ka alaeze a guzosie ike (ịbụ nna guzobere) yana ịbụ onye na -achị (nna ochie) nke alaeze ahụ ọ ga -akwado.
(Revised English Version (REV) Nkọwa Bible, https://www.revisedenglishversion.com/Isaiah/chapter9/6, ejiri ikike mee ihe, Mmekọrịta Mmụọ na Eziokwu)
Ụfọdụ ndị mmadụ kwenyere na n'ihi na a ga -akpọ Jizọs Immanuel (nke pụtara "Chineke nọnyeere anyị") na ya mere ọ ga -abụrịrị onye Chineke mere. Ọ bụghị otú ahụ. Aha ahụ “Immanuel” pụtara “Chineke nọnyeere anyị,” ọ bụkwa ihe nnọchianya nke eziokwu ahụ bụ na Chineke ga -anọnyere ndị Ya ịkwado na ịnapụta ha. Aha ahụ “Immanuel” dabara n'ụzọ amụma abụọ ahụ nke ọma ma n'oge Aịsaịa ma n'oge Jizọs. Aịsaịa 7:14 bụ amụma nwere mmezu abụọ dị iche iche nke ihe karịrị afọ 700 kewapụrụ. Ọ bụ amụma banyere otu nwa agbọghọ n'oge Aịsaịa na Ehaz, ọ bụkwa amụma banyere ọmụmụ Jizọs Kraịst. Ederede Hibru nwere ọtụtụ okwu nwere ike ịpụta ihe abụọ, nke bụ otu ihe kpatara enwere ọtụtụ ntụgharị asụsụ Bekee nke amaokwu ahụ. N'ezie nke ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya mgbe anyị ghọtara na ọ metụtara amụma dị ugbu a nke ihe na-eme n'oge ahụ, yana jikọtara ya na Matiu dịka amụma ọdịnihu nke mere na narị afọ asaa ọzọ.
Aisaia 7: 13-16
13 O wee sị, “Nụrụnụ, unu ụlọ Devid! Ọ bụ na ọ dị ntakịrị gị ime ka ike gwụ ndị mmadụ, na ị na -emekwa ka ike gwụ Chineke m? 14 N'ihi nka Onye -nwe -ayi onwe -ya g willnye unu ihe -iriba -ama. Le, nwa -ab virginọghọ nāmaghi nwoke gātu ime, mua nwa -nwoke, ọ gākpọ kwa aha -ya Immanuel. 15 Ọ ga -eri mmiri ara ehi rahụrụ arahụ na mmanụ a whenụ mgbe ọ maara ịjụ ihe ọjọọ na ịhọrọ ezi ihe. 16 N'ihi na tupu nwata ahụ amata ịjụ ihe ọjọọ na ịhọrọ ezi ihe, ala nke ị na -atụ egwu maka eze abụọ ya ga -atọgbọrọ n'efu.
Matiu 1: 22-23
22 Ihe a niile mere iji mezuo ihe Onyenwe anyị kwuru site n'ọnụ onye amụma: 23 "Le, nwa -ab virginọghọ nāmaghi nwoke gātu ime, mua nwa -nwoke, ha gākpọ kwa aha -ya Immanuel”(Nke pụtara, Chineke nọnyeere anyị).
"Immanuel", Nkọwa REV
Otu n'ime aha Jizọs Kraịst bụ "Immanuel," nke nwere ike ịsụgharị dịka, "Chineke nọnyeere anyị" ma ọ bụ "Chineke nọnyeere anyị." Anyị maara na Chineke nọnyeere anyị n'ime Jizọs Kraịst, Jizọs n'onwe ya kwukwara na ọ bụrụ na mmadụ ahụ ya, ọ hụla Nna. Aha na -abụkarị ihe atụ, ihe aha pụtara ibubata ụfọdụ njirimara nke Chineke chọrọ ka anyị mara. Mgbe a na -akpọ Jizọs Ọdụm nke Juda, Nwa Atụrụ ahụ, ma ọ bụ ntu ntu (Zek. 10: 4), Chineke na -ebubata njirimara gbasara Jizọs nke Ọ chọrọ ka anyị mara. A bịa na Immanuel, Chineke chọrọ ka anyị mara na site na Jizọs Kraịst, Chineke nọnyeere anyị. Ọ bụghị n'ebe anyị nọ n'ụzọ nkịtị, kama ọ na -eme ike site n'aka Ọkpara ya, dị ka 2 Ndị Kọrịnt 5:19 na -egosi: "Chineke nọ na Kraịst, na -eme ka ya na ụwa dị n'otu." Ọ dị mkpa ịgụ kpọmkwem ihe edere: Chineke nọ na Kraịst, ọ bụghị Chineke bụ Kraịst.
N'oge Ehaz na Aịsaịa, ihe dị njọ nye Juda. Syria na Israel bụ mba abụọ buru ibu karịa Juda, Juda agaghị enwe ohere dị ukwuu n'agha megide ha. Mana Aịsaịa buru amụma maka mgbapụta nke Juda, nke siri ike na Chineke ga -anọnyere ha ịnapụta ha, nke amụrụ nwa nke a ga -akpọ "Immanuel," na n'ezie Chineke nọnyeere Juda ma anapụta ha n'aka onye iro. Mgbe ahụ, ihe karịrị narị afọ asaa ka e mesịrị, n'ọmụmụ Kraịst, aha Immanuel bụ ihe nnọchianya ọzọ dabara adaba n'ihi na Chineke na -arụ ọrụ ike n'ime Kraịst ịkwado na ịnapụta ndị Ya na ime ka nzọpụta dịrị mmadụ niile, nke Jizọs mere.
Enwere ike ịhụ ihe nnọchianya n'aha n'ime Akwụkwọ Nsọ niile, ọ bụghị ihe pụrụ iche nye Jizọs Kraịst. E nyere ọtụtụ mmadụ aha ga -ebute nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na ekwere ha n'ụzọ nkịtị. Ànyị ga -ekwenye na Bitịa, ada Fero, bụ nwanne Jizọs maka na aha ya bụ "ada Yahweh?" Ànyị ga -ekwenye na Eliab bụ Mesaịa n'ezie ebe aha ya pụtara "Chineke m [bụ nna] m?" Ọ bụghị n'ezie. Ọ ga -abụ nnukwu ihie ụzọ ikwu na ihe aha pụtara na -egosi na ọ bụ eziokwu. Anyị maara na aha Jizọs dị oke mkpa - ọ na -ekwupụta eziokwu na, dị ka Ọkpara Chineke na dị ka onyinyo Chineke, Chineke nọnyeere anyị na Jizọs, mana aha ahụ emeghị ka Jizọs bụrụ Chukwu.
(Revised English Version (REV) Nkọwa Bible, https://www.revisedenglishversion.com/Matthew/chapter1/23, ejiri ikike mee ihe, Mmekọrịta Mmụọ na Eziokwu)
Nke a kwekọrọ na echiche Akwụkwọ Nsọ nke Agencylọ ọrụ ebe a na -ewere ndị nnọchi anya Chineke dị ka onye nnọchi anya Chineke. hụkwuo na https://biblicalagency.com
"Nwa agbọghọ", Nkọwa REV
Ọ bụ ezie na ọtụtụ nsụgharị Bekee nke Bekee nwere "nwa agbọghọ na -amaghị nwoke" kama ịbụ "nwa agbọghọ," okwu Hibru na -ezo aka na -eto eto nwanyị, ma ọ bụ onye nwere ike ịlụ di ma ọ lụbeghị nwunye (ya mere ọ ga -abụ na ọ bụ nwa agbọghọ na -amaghị nwoke), ma ọ bụ nwa agbọghọ lụrụ nwanyị . Enwere ezi ihe akaebe na na Aịsaịa 7:14, 'ekwesịrị ịtụgharị almah' nwa agbọghọ 'ọ bụghị' nwa agbọghọ na -amaghị nwoke. Otu bụ na e nyere Ehaz “akara” nke nwa agbọghọ ahụ na a ga -emeri Israel na Syria n'agha n'oge na -adịghị anya. Aisaia siri, “… Onye -nwe -ayi n’onwe ya ga -enye [eze Ehaz] ihe ịrịba ama. Lee, nwa agbọghọ ahụ ga -atụrụ ime wee mụọ nwa nwoke, ọ ga -akpọkwa aha ya Immanuel ... tupu nwata amata ịjụ ihe ọjọọ na ịhọrọ ezi ihe, ala nke ị ga -agbahapụ ndị eze ya abụọ (Israel na Syria). 7:14, 16). Ihe omume ahụ mere ihe dị ka 730 BC, ogologo oge tupu amụọ Kraịst. Ihe ọ pụtara pụtara ọzọ bụ na a na -akpọ nwa nwoke enyere n'oge Ehaz Immanuel na Jizọs.
(Revised English Version (REV) Nkọwa Bible, https://www.revisedenglishversion.com/Isaiah/chapter7/14, ejiri ikike mee ihe, Mmekọrịta Mmụọ na Eziokwu)
Malakaị 3 na -ekwu maka onye ozi ọgbụgba ndụ na -akwado ụzọ maka Chineke, mgbe ahụ Onyenwe anyị ga -abịa n'ụlọ nsọ ya na mberede. A na -ejikarị amaokwu a na -atụ aro na n'ihi na onye ozi ahụ “ga -akwadebe ụzọ n'ihu m,” ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, na ebe ọ bụ na Jọn Baptist kwadebere ụzọ nke Onyenwe anyị Jizọs, site n'echiche, Jizọs bụ Onyenwe anyị Chineke. Agbanyeghị, nke a bụ ihe mgbagwoju anya nke enwere nghọtahie etu esi “idozi ụzọ Onyenwe anyị” kwesịrị ịghọta.
Malakaị 3: 1-3 (ESV), "M na-eziga onye ozi m, ọ ga-edozi ụzọ n'ihu m"
1 “Lee, M na -eziga onye ozi m, ọ ga -edozikwa ụzọ n'ihu m. Na Onye -nwe nke unu na -achọ ga -abịa n'ụlọ nsọ ya na mberede; na onye ozi ọgbụgba ndụ ahụ nke masịrị gị, lee, ọ na -abịa, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova nke usu nile nke ndi -agha puta. 2 Ma ònye pụrụ idi ụbọchị ọbịbịa ya, ònye nwekwara ike iguzo mgbe ọ pụtara? N'ihi na ọ dị ka ọkụ onye na -anụcha ihe na dị ka ncha nke ndị na -asụcha ihe. 3 Ọ ga -anọdụ dị ka onye na -anụcha ihe na onye na -eme ka ọlaọcha dị ọcha, ọ ga -emekwa ka ụmụ Livaị dị ọcha, nụchaa ha dịka ọla edo na ọla ọcha, ha ga -ewetakwa onyinye. n’ezi omume nye Jehova.
Aisaia 40: 3-6 “Kwadebere ụzọ Jehova n'ọzara”
3 Otu olu na -eti mkpu:Dozienu uzọ Jehova n'ọzara; meenụ ka okporo ụzọ awara awara guzoziere Chineke anyị n'ọzara. 4 Ag valleybuli kwa ndagwurugwu ọ bula, ag mountainme kwa ka ugwu ọ bula na ugwu ntà ọ bula di ala; ala ahụ a na -ahaghị nhata ga -adị larịị, ebe ndị dị larịị ga -aghọ ala dị larịị. 5 A ga -ekpughekwa ebube Jehova, anụ ahụ niile ga -ahụkọ ya ọnụ, n'ihi na ọnụ Jehova ekwuwo. ”
Genesis 18:19, Isaiah 35:8-10, Psalm 5:8, Psalm 25:8, Psalm 27:11, Psalm 86:11, ye Mme N̄ke 12:28 ẹdi akpan n̄kpọ ndifiọk ke “usụn̄ Jehovah” edi. “Ụzọ nke ịdị nsọ” nakwa na “ụzọ Jehova bụ ebe siri ike nye ndị zuru okè.” N’ihi ya, “ụzọ Jehova” na-ezo aka n’ụzọ ezi omume na ịdị nsọ. Jọn Baptist na Jizọs bụ ndị nkwusa ịdị nsọ na ịdị nsọ bụ ụzọ nke Onyenwe anyị! Ịkwado ụzọ nke Onye-nwe bụ ikwado ụzọ nke ịdị-nsọ kwekọrọ n’ikwusa ozi ọma nke nchegharị maka mgbaghara mmehie. Ma Jizọs ma Jọn Onye Na-eme Baptizim bụ ndị ozi nke Chineke ma Jizọs kwupụtakwara ihe dị otú ahụ na Luk 4:16-21, Matiu 12:18, Jọn 4:34, Jọn 5:30, Jọn 7:16-18, Jọn 8:26-29. , Jọn 8:40, na Jọn 12:49-50 . Nkpughe 1:5 na-akọwa Jizọs Kraịst dịka onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi (onye ozi).
“Ụzọ nke Onyenwe anyị” n’okwu a egosighị na Jizọs Kraịst (Mesaịa) bụ Onyenwe anyị Chineke. “Onyenwe anyị” nke Aisaia 40:3 na Malakaị 3:1 gbasara YHWH (otu Chineke na Nna). Ma ọtụtụ ndị na-akwado mgbaghara na-ekwu na amaokwu a gbasara Kraịst na na Jizọs bụ Onyenwe anyị ka a na-ekwu maka ya na ihe ọ pụtara bụ na Jizọs bụ YHWH. Otú ọ dị, ọ bụ isi ihe na-ezighị ezi ịgụ Malakaị 3:1 ma ọ bụ Aịsaịa 40:3 dị ka Jọn na-akwadebe ụzọ Jizọs. Ndikom abua ahu bu ndi-orù YHWH. Jisus abụghị YHWH n'onwe ya kama kama a na-akpọ ya dị ka mpi nzọpụta nke ewelitere n'ụlọ Devid (Luk 1:69). Ọrụ Jọn bụ ịkwado ndị mmadụ ịnara Nna ahụ. Ma nke a ka e mere site n’ime ka obi ha ziri ezi site na nchegharị.
Enwetara nghọta ziri ezi ọzọ site na Luk 1: 73-79 nke a na-ekwu maka Jọn Baptist onye a ga-akpọ onye amụma nke Onye kachasị ihe niile elu; n'ihi na ị ga -aga n'ihu Onyenwe anyị ịkwadebe ụzọ ya, inye ndị ya ihe ọmụma nke nzọpụta na mgbaghara nke mmehie ha, n'ihi obi ebere nke Chineke anyị. ” N'ụzọ doro anya, Onyenwe anyị n'akụkụ a bụ Chineke Kachasị Elu. Ọzọkwa, Jọn na -akwado ụzọ maka Onyenwe anyị ịbịakwute ndị mmadụ site n'ịgwa ha ka ha chegharịa wee bụrụ ndị ezi omume. N'ọdịbendị oge ochie, a na -ebu ụzọ ebu ụzọ tupu nleta eze ka ọ kpọsaa ọbịbịa ya na -abịanụ. Jọn bụ onye mbute ụzọ ahụ, e zigara ya ikwusa nleta Onyenwe anyị Chineke.
Mgbe Jọn ji baptism nke nchegharị na -eme baptizim iji mee ka ha dị ọcha ma nụchaa ha dị ka ọlaọcha, Jizọs bịakwara ka e mee ya baptizim, Onyenwe anyị Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile batara na Jizọs na mberede. Mgbe Chineke letara ndị ya n'ezie, o mere nke a site n'ibikọ, biri n'ime nwa ya nwoke bụ Jizọs, ma jiri ya mere ụlọ nsọ mkpagharị. Chineke zutere ndị ahụ Jizọs zutere. Ndị hụrụ Jizọs, Ọkpara Chineke, hụkwara Chineke. Jizọs kpọrọ ahụ ya ụlọ nsọ nke Chineke. Unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mb thee baptism nke Jọn kwusara, otú Chineke si were Mọ Nsọ na ike tee Jisus Onye Nazaret manu. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya. (Ọrụ 10: 37-38)
Isaiah 35: 8 (ESV), Ụzọ nke ịdị nsọ
8 Okporo ụzọ ga -adịkwa n'ebe ahụ, agākpọ kwa ya Ụzọ nke ịdị nsọ; onye ruru árú agaghi -agabiga na ya. Ọ ga -abụ nke ndị na -aga n'ụzọ; ọ bụrụgodi na ha bụ ndị nzuzu, ha agaghị akpafu akpafu.
(Jenesis 18:19) Idebe ụzọ Jehova site n’ime ezi omume na ezi omume
19 N'ihi na arọputawom ya, ka o we nye umu-ya na ulo-ya ndi gānọchi ya iwu idebe uzọ Jehova n'ime ezi omume na ezi omume, ka Jehova we wetara Abraham ihe O kwere ya nkwa.”
DEUTERONOMI 5:33 I gēje ije n'uzọ nile: Chineke enyewo gi iwu
33 Unu gēje ije n'uzọ nile nke Jehova, bú Chineke-gi, nyeworo gi n'iwu, ka i we di ndu, ka o we di gi nma, ka i we di ogologo n'ala ahu nke i gēnweta.
Abụ 1:6 (ESV), ụzọ ndị ezi omume
6 N'ihi na Jehova mara uzọ ndi ezi omume: Ma uzọ ndi nēmebi iwu gāla n'iyì.
ABÙ ỌMA 5:8 Menu ka uzọ-Gi guzozie n'irum
8 Jehova, durum n'ezi omume-Gi n'ihi ndi-irom; mee ka uzọ-gi guzozie n'irum.
Abụ Ọma 25:8, Ọ na-ezi ndị mmehie ụzọ
8 Ọ di nma na onye ziri ezi ka Jehova bu; ya mere ọ nēzí ndi-nmehie n'uzọ.
ABÙ ỌMA 27:11 Jehova, zím uzọ-Gi
11 + Jehova, kuziere m ụzọ gị, Me kwa ka m'je n'uzọ ziri ezi n'ihi ndi-irom.
ABÙ ỌMA 86:11 Jehova, zím uzọ-Gi
11 + Jehova, kuziere m ụzọ gị, ka m'we je ije n'ezi-okwu-Gi; me ka obim di n'otu itu egwu aha-Gi.
Ilu 10: 29-30 (Igbo) Ụzọ Jehova bụ ebe siri ike nye ndị zuru oke
29 Ụzọ Jehova bụ ebe siri ike nye ndị zuru okè, ma mbibi ga -adịrị ndị na -eme ihe ọjọọ. 30 Agaghi -ewezuga ndi ezi omume, ma ndi n wickedmebi iwu agaghi -ebi n'ala.
Ilu 12:28 (ESV), n'okporo ụzọ ezi omume ka ndụ dị
28 N'ụzọ nke ezi omume bụ ndụ, ọnwụ dịkwa n'okporo ụzọ ya.
Mark 1: 1-4 (Lee, aga m eziga onye ozi m n'ihu gị)
1 Mmalite ozi -ọma nke Jisus Kraịst, Ọkpara nke Chineke. 2 Dika edeworo ya n'akwukwọ Aisaia,Lee, ana m ezipụ onye ozi m n'ihu gị, onye ga -akwado ụzọ gị, 3 olu onye nēti nkpu n'ọzara, si,Kwadebenụ ụzọ Onyenwe anyị, meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ, '" 4 Jọn pụtara, na -eme baptism n'ime ọzara na -ekwusakwa baptism nke nchegharị maka mgbaghara mmehie.
LUK 1: 73- 79 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ) Ma gị onwe gị kwa, nwatakịrị, a ga-akpọ gị onye amụma nke Onye Kasị Elu
73 iyi nke ọ toụụrụ nna anyị Abraham, inye anyị 74 ka anyị, ebe a napụtara anyị n'aka ndị iro anyị, wee jeere ya ozi n'atụghị egwu, 75 n'ịdị nsọ na ezi omume n'ihu ya ụbọchị anyị niile. 76 Ma gị onwe gị, nwatakịrị, a ga -akpọ gị onye amụma nke Onye Kasị Elu; n'ihi na ị ga -aga n'ihu Onyenwe anyị ịkwadebe ụzọ ya, 77 inye ndi -Ya ọmuma nzọputa ná mgbaghara nke mmehie ha, 78 n'ihi obi -ebere nke Chineke -ayi, nke ọwụwa anyanwụ ga -eji si n'elu bịa leta anyị 79 inye ìhè nye ndị nọ ọdụ n'ọchịchịrị na na ndò ọnwụ, iduzi ụkwụ anyị n'ụzọ nke udo. ”
Luk 3: 2-6 (Olu nke onye na-eti mkpu n'ọzara)
2 n'oge Anas na Keyafas onye isi nchụ aja, okwu Chineke bịakwutere Jọn nwa Zekaraya n'ọzara. 3 O we ba n'ala nile di Jọdan buruburu, n proclakwusa baptism nke nchèghari, ka ewe b forgivenessaghara nmehie. 4 Dika edeworo ya n'akwukwọ okwu Aisaia onye -amuma,
"Olu nke onye na -eti mkpu n'ọzara: 'Kwadebenụ ụzọ Onyenwe anyị, mee ka okporo -uzọ -ya zie ezi. 5 A ga -ejupụta ndagwurugwu ọ bụla, ugwu niile na ugwu nta niile ga -adịkwa ala, ebe gbagọrọ agbagọ ga -adịkwa larịị, ebe ndị gbara ọkpụrụkpụ ga -abụ ụzọ dị larịị. 6 anu -aru nile, bú madu, gāhu kwa nzọputa Chineke'"
(Luk 3: 21-22) Mmụọ Nsọ dakwasịrị ya
21 Ugbu a mgbe emere mmadụ niile baptizim, na mgbe E mekwara Jizọs baptizim ma na -ekpe ekpere, eluigwe meghere, 22 Mmụọ Nsọ wee dakwasị ya n'ụdị anụ ahụ, dị ka nduru; olu we si n'elu -igwe da, si, I bu Ọkparam M'huru n'anya; na gị enwere m obi ụtọ. "
(Luk 4: 16-21) Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tewo m mmanụ.
16 O wee bịa Nazaret, ebe ọ nọ too. Dịkwa ka ọ na -eme, ọ gara n'ụlọ nzukọ n'ụbọchị izu ike wee bilie gụọ akwụkwọ. 17 Ewe nye ya akwukwọ Aisaia onye -amuma. O meghere akwụkwọ mpịakọta ahụ wee chọta ebe e dere ya, 18 "Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitere m ka m kwusaara ndị a dọtara n'agha nnwere onwe na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ, ka m wee tọhapụ ndị a na -emegbu emegbu., 19 ịkpọsa afọ ihu ọma Onyenwe anyị. ” 20 O wee mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ nyeghachi onye na -ejere ya ozi wee nọdụ ala. Ndị niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee legide ya anya. 21 O wee malite ịsị ha,Taa emezuwo Akwụkwọ Nsọ a na ntị gị. "
Ọrụ 10: 37-38 (Chineke) tere Jizọs onye Nazaret mmanụ-Chineke nọnyeere ya
37 unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mgbe baptizim nke Jọn kwupụtara gasịrị: 38 otú Chineke ji mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu. n'ihi na Chineke nọnyeere ya.
(Matiu 12:18) Lee nwa odibo m nke m họpụtara
18 "Lee, odibo m nke m họpụtara, onye m hụrụ n'anya nke ihe ya na -atọ mkpụrụ obi m ụtọ. M ga -etinye mmụọ m n'ahụ ya, ọ g willkwusa kwa mba nile ikpe ziri ezi.
Mkpughe 1: 5-6 (NIV), Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi
5 na site Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na -achị ndị eze n'ụwa. Nke onye hụrụ anyị n'anya ma jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị 6 ma mee anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya, ka otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
Nghọtahie a na -agụkarị na -agbagha Ndị Hibru 1:10 na Abụ Ọma 102: 25 n'ụzọ a na -eche na Jizọs bụ onye “tọrọ ntọala ụwa n'oge ochie,” wee si otú a bụrụ Jizọs bụ onye okike Chineke. Agbanyeghị, nke a bụ ịkọwa njikọ nke Ndị Hibru 1: 8-9 na Ndị Hibru 1: 10-12. Ka anyị leba anya na amaokwu nke Abụ Ọma e hotara na Ndị Hibru na nhota nke Ndị Hibru 1: 8-12.
(Abụ Ọma 45: 6-7) Chineke, Chineke gị, etewo gị mmanụ
6 Ocheeze gị, Chineke, na -adị ruo mgbe niile ebighị ebi. Mkpanaka alaeze gị bụ mkpanaka nke izi ezi; 7 ị hụrụ ezi omume n'anya ma kpọọ ajọ omume asị. Ya mere, Chineke, Chineke gị, etewo gị mmanụ ańụrị karịa ndị ibe gị;
Abụ Ọma 102: 25-28 (NIV)
25 Site na mgbe ochie ị tọrọ ntọala ụwa, na eluigwe bụ ọrụ aka gị. 26 Ha ga -ala n'iyi, mana ị ga -anọ; ha niile ga -aka nká dị ka uwe. Ị ga -agbanwe ha dị ka uwe, ha ga -agabiga, 27 mana ị bụ otu, afọ gị enweghị ọgwụgwụ. 28 Ụmụ ndị ohu gị ga -ebikwa n'obi iru ala; A ga -eme ka mkpụrụ ha guzosie ike n'ihu gị.
Ndị Hibru 1: 8-12, ị ga-afụkọta ha dị ka uwe, dị ka uwe ka a ga-agbanwe ha
8 Ma banyere Ọkpara [ọ na -ekwu], “ocheeze gị, Chineke, na -adị ruo mgbe niile ebighị ebi, mkpanaka nke izi ezi bụ mkpanaka alaeze gị. 9 Afo amama edinen ido onyụn̄ asua idiọkido; ya mere Chineke, Chineke gị, etewo gị mmanụ a gladụrị karịa ndị ibe gị. " 10 Ma, “Gị onwe gị, Onyenwe anyị, tọrọ ntọala ụwa na mmalite, eluigwe bụkwa ọrụ aka gị; 11 ha gāla n'iyì, ma gi onwe -gi nānọgide; ha niile ga -aka nká dị ka uwe, 12 ị ga -afụkọta ha dị ka uwe, a ga -agbanwe ha dị ka uwe. Ma gị onwe gị bụ otu, afọ gị agaghị agwụ agwụ. ”
"Ocheeze gị, Chineke, na -adị ruo mgbe niile ebighị ebi", Nkọwa REV
Ndị Hibru 1: 8 na -ezo aka n'Abụ Ọma 45: 6 nke nwere ohere maka ntụgharị "ocheeze gị sitere na Chineke," ma ọ bụ "ocheeze gị bụ ocheeze nke Chineke ”(Akwụkwọ bụ́ Expositor’s Bible Commentary). “Ocheeze gị bụ Chukwu ruo mgbe ebighi ebi” pụtara na Chineke bụ ikike, “ocheeze” nke eze, na eze na -achị site n'ike Chineke. Eze a, na site na mgbakwunye, Mesaịa, onye bụ ezi eze Izrel, ka Chineke meere amara ma gọzie (Ọma 45: 2). N'iburu nke ahụ, ọ dabara adaba ka eze a mata na ọ bụ Chineke nyere ya ikike nke eze, nke bụ isi ihe dị n'Abụ Ọma 45: 9. Abụ Ọma nke 45 bụ abụ agbamakwụkwọ nke eze nke sitere na eze Devid, ikekwe ọbụna Solomọn, na mgbakwunye, ụfọdụ n'ime ya metụtara Mesaịa ahụ. Akpọrọ ya "eze" na "Solomọn" na ntinye nkọwa a maka ịdị mfe nghọta, mana eze ọzọ sitere na Devid nwere ike ibu n'uche.
Ihe odide Hibru nke Abụ Ọma 45: 6 ghe oghe maka ọtụtụ nkọwa na ntụgharị dị iche iche. Allen Ross dere, sị: “… enwere opekata mpe nkọwa ise” (Kregel Exegetical Library: A Commentary on the Psalm, Vol. 2). N'inye ntụgharị asụsụ enwere ike, anyị agaghị enwe ike ịsị, "Nke a bụ otu nkọwa ziri ezi," mana anyị nwere ike nye akaebe maka ihe yiri ka ọ bụ ntụgharị na nkọwa kacha dị mma. Robert Alter, na The Hebrew Bible: A Translation with Commentary, sụgharịrị Abụ Ọma 45: 7 ka “ocheeze Chineke dị ruo mgbe ebighị ebi,” wee dee na nkọwa, “Ụfọdụ na -akọwa Hibru ebe a ka ọ pụta, 'Ocheeze gị, Chineke , ”Mana ọ ga -abụ ihe nzuzu inwe adreesị nye Chineke n'etiti abụ a n'ihi na ọ bụ eze ma ọ bụ nwanyị ọ na -alụ ka ọbụ abụ ahụ dum kwuru.”
Iji ghọta Abụ Ọma 45: 6, anyị aghaghị ibu ụzọ mụta ihe ụfọdụ banyere ya. Dịka ọmụmaatụ, onye na -ekwu okwu bụ ọbụ abụ, ọ bụghị Chineke. Ọbụ abụ ahụ na -ekwu maka Chineke n'ime onye nke atọ, dịka ọmụmaatụ, "Chineke gọziri gị ruo mgbe ebighi ebi" (Ọma 45: 2), na "Chineke tere gị mmanụ" (Ọma 45: 7). Ụfọdụ ndị mmadụ na -eche na ọ bụ Chineke na -ekwu okwu, mana ederede na -arụrịta ụka megide nke ahụ. Ọzọkwa, abụ ọma ahụ bụ abụ “amụma abụọ”. Isiokwu nke abụ ọma bụ eze Izrel, ma eze Devid nke na -achị n'ocheeze Devid (ikekwe Solomọn), onye lụrụ nwanyị ma mụọ ụmụ (lee nkọwa na Ọma 45: 9) nakwa Mesaịa, “Devid nke ka ukwuu” onye ga -emecha keta ocheeze ruo mgbe ebighi ebi. Ya mere, amaokwu ụfọdụ dị na abụ ahụ na -arụtụ aka na Mesaya karịa ebe ndị ọzọ na -arụtụ aka na eze Devid, dị ka ndị gbasara ya nwere eze nwanyị, ịlụ di na nwunye na ịmụ ụmụ. Ebe Abụ Ọma nke 45 nwere amụma abụọ (dịka anyị hụrụ n'elu), na Abụ Ọma 45: 6-7 metụtara ma Solomọn ma Mesaịa ahụ, ọ bụrụ na amaokwu ahụ na-akpọ eze “Chukwu,” mgbe ahụ nke ahụ ga-eme ma Solomọn ma Mesaịa ahụ Chineke, nke a na -apụghị ịgbagha agbagha, ọ nweghịkwa ihe dị n'ime iji tinye Abụ Ọma 45: 6 na Mezaịa na -enweghị amaokwu 7 na -ekwu maka otu eze.
Abụ Ọma nke 45 bụ mkpughe Chineke kpughere ndị Juu iji gwa ha banyere eze ha, ndị Juu gụkwara Abụ Ọma ruo ọtụtụ narị afọ wee mara na ọ bụ maka Mesaya ha, mana ọ dịghị mgbe ha kwubiri na Mezaịa ahụ bụ "Chineke n'anụ ahụ" ma ọ bụ akụkụ nke Atọ n'Ime Otu. Chukwu. Na echekwara na ndị Juu maara na Abụ Ọma nke 45 zoro aka na Mesaịa ha, edekwara ya n'akwụkwọ ha. Iji maa atụ, Targum (nkọwa Aramaic na agba ochie) na -akọwa Abụ Ọma 45: 2 dị ka, “ịma mma gị, eze Mesaya, karịrị nke ụmụ mmadụ” (Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, William B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI. Nkebi nke abụọ, p. 718). Yabụ ọ bụrụ na Chineke kpughere ndị Ya mkpughe ka ọ gwa ha na Mesaịa ahụ ga -abụ Chukwu, mbọ ya bụ ọdịda dara ada, nke ahụ bụ ezigbo ihe akaebe na abụ ọma anaghị ekwu na Mesaịa ahụ bụ Chineke n'anụ ahụ.
Enwere ọtụtụ okwu n'Abụ Ọma nke 45 na -egosi na eze na abụ ọma abụghị Chineke, kama ọ bụ mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, Abụ Ọma 45: 2 na -ekwu, “Ị mara mma karịa n'etiti ụmụ mmadụ,” si otú a na -akọwa ya dị ka mmadụ site n'iji akpaala okwu nkịtị maka mmadụ, "nwa nke mmadụ," wee gaa n'ihu kwuo, "Chineke gọziri gị ruo mgbe ebighị ebi." N'ikwu na "nwa nke mmadụ" (mmadụ) bụ onye Chineke gọziri, abụ ọma ahụ na -enye ọbụna ihe akaebe na eze a na -ekwu maka ya abụghị Chineke. Enweghi ihe akaebe n'ime Akwụkwọ Nsọ maka na Chineke na -agọzi Chineke, o yighịkwa ka ọ bụ ihe kpatara ma ọ bụ mkpa maka nke ahụ, mana ọ dị ụmụ mmadụ mkpa ka Chineke gọzie ha ma na -enwekarị ngọzi na Akwụkwọ Nsọ. Ihe akaebe ọzọ na -egosi na abụ a na -ekwu maka eze mmadụ bụ n'Abụ Ọma 45: 7, nke kwuru, "Ị hụrụ ezi omume n'anya, kpọọ ajọ omume asị. Ya mere, Chineke, bụ́ Chineke gị, etewo gị mmanụ a exụrị karịa ndị ọgbọ gị. ” Na ederede kpọrọ Chineke, “Chineke gị,” ya bụ, Chineke nke eze, na -egosi na eze dị ala karịa Chineke. “Chineke” enweghị Chineke.
Ọzọkwa, Chineke eze ahụ 'tere ya' mmanụ, mee ka ọ dị elu karịa 'ndị ọgbọ' ya. Nke a bụ ihe akaebe megide nkọwa Atọ n'Ime Otu nke amaokwu ahụ maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Otu bụ na “Chineke” enweghị ndị ọgbọ a ga -ebuli elu, ebe eze mmadụ nke Israel, gụnyere Mesaịa, nwere ndị ọgbọ. Mesaịa ahụ, Jizọs Kraịst, nwere ndị ọgbọ n'ihi na ọ bụ mmadụ kpamkpam ọ bụghị Chukwu nke mmadụ dịka ozizi Atọ n'Ime Otu na-ekwu. Ọzọkwa, Abụ Ọma 45: 7 kwuru na eze a hụrụ ezi omume n'anya ma kpọọ ajọ omume asị, "yabụ" Chineke tere ya mmanụ. Nke a nwere ezi uche ma ọ bụrụ na eze bụ mmadụ, mana ọ bụrụ na eze a bụ “Chukwu,” ka o tere mmanụ n'ezie n'ihi na ọ hụrụ ezi omume n'anya? Ọ baghị uru na ọ dị mkpa ka “Chineke” tee ya mmanụ, ọ baghịkwa uru na Chineke tere ya mmanụ n'ihi na ọ "hụrụ ezi omume n'anya." Ebe ọ bụ na nkọwa Chineke bụ onye ezi omume ma hụ ezi omume n'anya, ọ baghị uru ikwu na e tere Chineke mmanụ n'ihi na ọ hụrụ ezi omume n'anya. Na nchịkọta, Abụ Ọma nke 45 abụghị Chineke na -agwa Chineke okwu. Ọ bụ ọbụ abụ na -ekwu okwu, isiokwu a na -ekwukwa bụ eze mmadụ.
Ọtụtụ ndị na -agụ otu Akwụkwọ Nsọ na -anabata ntụgharị nke Abụ Ọma 45: 6 nke yiri nnọọ ntụgharị nke Atọ n'Ime Otu. Agbanyeghị, ha ghọtara na “Elohim” (“Chukwu” ma ọ bụ “chi”) nwere ike ịpụta mmadụ, na nke a, ha na -etinye ya na eze mmadụ na Mesaịa mmadụ. Nsụgharị nkịtị nke Akwụkwọ Nsọ jikọrọ ọnụ bụ: “Ocheeze gị, chi, na -adị ruo mgbe niile ebighị ebi.” Enwere ike ịkpọ ndị nnọchi anya Chukwu. (Jọn 10: 34-36, Abụ Ọma 82: 6-7, Ọpụpụ 7: 1, Ọpụpụ 21: 6, Ọpụpụ 22: 8-9). Onye a na -akpọ Chineke ebe a ka etinyere onye Chineke tere mmanụ. Okwu Chineke na -ezo aka n'ike na ikike kachasị elu ọ ga -enwe n'alaeze a nke o guzobere ma kwado. Mesaịa ahụ abụghị Chineke n'ụzọ nkịtị kama o nwere ikike dị nsọ dịka onye nnọchi anya Chineke họpụtara ka ọ chịa ụwa n'ezi omume. Nke a pụtara ìhè n'amaokwu 9 ebe ọ na -ekwu "Chineke, Chineke gị, etewo gị mmanụ". Ya bụ, onye Chineke tere mmanụ bụ “Chineke” n'echiche nke na ọ bụ onye Chineke họpụtara ịchị. Ọ bụ Chineke site na onye nnọchiteanya mana ọ bụghị site na onlogy. Maka ihe ndị ọzọ na nke a lee echiche Akwụkwọ Nsọ nke ụlọ ọrụ hụ https://biblicalagency.com
Ọtụtụ nkọwa dị n'elu sitere na nkọwa Bible nke REV (Revised English Version): https://www.revisedenglishversion.com/Psalms/chapter45/6 , ejiri ya na ikike, Mmekọrịta Mmụọ na Eziokwu
"Site na mgbe ochie ị tọrọ ntọala ụwa - ị ga -apịakọta ha dị ka uwe, dị ka uwe ka a ga -agbanwe ha"
Ndị Hibru 1: 10-12 na-ekwu maka Abụ Ọma 102: 25-28. Amaokwu nke dị n'asụsụ Hibru ka e hotara site na ederede Septuagint nke Agba Ochie, nke dịtụ iche n'ihe odide Hibru. Ejikọtara amaokwu 10-12 na amaokwu 8-9 site na “na” mana akọwaghị mkpakọrịta ahụ. Ndị na -akwado ozizi Atọ n'Ime Otu na -ejikọ “gị, Onyenwe anyị” onye tọrọ ntọala ụwa na mbido ya na “nke Ọkpara” nke amaokwu 8. Otú ọ dị, mkpakọrịta ziri ezi bụ “Chineke, Chineke gị, etewo gị mmanụ obi ụtọ karịrị gị. ndị enyi gị ”nke“ ị ga -afụkọta ha dị ka uwe mwụda, dị ka uwe ka a ga -agbanwe ha. ” Ya bụ, atụmatụ Chineke bụ iji onye e tere mmanụ kpee ụwa ikpe n'ezi omume (Ọrụ 17: 30-31). Site na Kraịst, onye nnọchi anya Chineke họpụtara, Chineke ga -eme ka ya na ihe niile dị n'otu. (1 Ndị Kọrịnt 15: 24-28)
Ndị Hibru 1: 10-12 bụ ntụaka amụma nke na-ezo aka na okike ọhụrụ kama ịbụ ihe okike mbụ. Ọ bụrụ na anyị anọgide na -agụ ndị Hibru, na -echeta na ederede mbụ enweghị nkebi isi, Ndị Hibru 2: 5 na -enye nkọwa, "Ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka O doro n'okpuru ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya." N'ikwekọ, isiokwu nke ngalaba Ndị Hibru a abụghị eluigwe na ụwa dị ugbu a, nke Chineke kere, kama ọ bụ eluigwe na ụwa nke Ọkpara ga -elekọta. Onye na -agụ ya kwesịrị icheta na okwu ahụ bụ “mmalite” ekwesịghị ịdị na mbido oge, kama ọ bụ mmalite nke ihe onye edemede na -ekwu maka ya.
Ọtụtụ ntụnyere Agba Ochie na Agba Ọhụrụ na -agwa anyị na a ga -enwe eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ mgbe nke a gasịrị, nke anyị bi ugbu a, ga -agabiga. Mbụ eluigwe na ụwa nke puku afọ otu puku afọ nke Jizọs, nke ga-ala n'iyi (Aịsaịa 1000:65; Mkpu. 17: 20-1), emesịa eluigwe na ụwa nke Mkpughe 10: 21-1: 22, nke ga-adịgide ruo mgbe ebighi ebi. Ihe gbara ya gburugburu ga -egosi na Ndị Hibru 21:1 na -ekwu maka eluigwe na ụwa ndị a ga -abịa n'ọdịnihu. Ndị Hibru 10: 1, nke na -ekwu, “mgbe ọ ga -akpọbata nwa mbụ n'ime ụwa”, bụ ntụaka maka ọrụ Jizọs dịka onye guzobere ụwa nke na -abịanụ nke Alaeze. Amaokwu oge ụfọdụ nke nwere ike inwe mkpakọrịta na -edoghị anya, agaghị agabiga ihe akaebe doro anya ekesa site na Akwụkwọ Nsọ.
Ọtụtụ nkọwa dị n'elu sitere na nkọwa Bible nke REV (Revised English Version): https://www.revisedenglishversion.com/Hebrews/chapter1/10, ejiri ya na ikike, Mmekọrịta Mmụọ na Eziokwu
Ọrụ 17: 30-31 (NIV), Chineke ga-ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara
(1 Ndị Kọrịnt 15: 24-28) Chineke edobela ihe niile n'okpuru ụkwụ ya.
24 Mgbe ahụkwa ka ọgwụgwụ ga -abịa, mgbe ọ ga -enyefe alaeze ahụ n'aka Chineke Nna mgbe o bibisịrị ọchịchị niile na ikike niile na ike niile. 25 N'ihi na ọ ghaghi ibu eze rue mb hee Ọ g putdebewori ndi-iro-ya nile n'okpuru ukwu-ya. 26 Onye iro ikpeazụ a ga -ebibi bụ ọnwụ. 27 n'ihi na "Chineke edowo ihe nile n'okpuru ukwu Ya. " Ma mgbe ọ na -ekwu, “e doro ihe niile n'okpuru,” ọ pụtara nke ọma na ewezuga onye tinye ihe niile n'okpuru ya.. 28 Mgbe edobere ihe niile n'okpuru ya, mgbe ahụ Ọkpara ahụ n'onwe ya ga -edokwa onwe ya n'okpuru onye ahụ nke doro ihe niile n'okpuru ya, ka Chineke wee bụrụ ihe niile n'ime ihe niile.
(Ndị Hibru 2: 5) Chineke doro ụwa na -abịa nke anyị na -ekwu maka ya
5 N'ihi na ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro n'okpuru ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya.
Isaiah 65: 17 (ESV), "M ga -eke eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ."
17 “N'ihi na, M na -eke eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ, a gaghị echetakwa ihe mbụ niile, ha agaghị abatakwa n'uche.
Mkpughe 21: 1-2 (NIV), ahụrụ m eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ
1 mgbe ahụ M wee hụ eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ, n'ihi na eluigwe mbụ na ụwa mbụ agabigawo, na oké osimiri adịkwaghị. 2 M'we hu obodo nsọ ahu, bú Jerusalem ọhu, ka ọ n outsi n'elu -igwe ridata site n'ebe Chineke nọ, edoziri ya dika nwanyi anālu ọlu nke achọworo ya mma.
Ụfọdụ na -agụ n'ime Zekaraịa 12:10 na Onye -nwe Chineke bụ onye ahụ a mara ube, n'ihi na ụfọdụ nsụgharị Bekee nke Zekaraịa 12:10 na -agụ, sị: “Ha ga -ele m anya, onye ahụ ha mara ube…” Agbanyeghị, enwere okwu ederede metụtara. nnyefe nke ederede Hibru nke a ga -enyocha ka anyị nwee ntụgharị ziri ezi na ihe amaokwu ahụ pụtara. Ụfọdụ ndị ntụgharị okwu na -enye onye nnọchiaha mbụ (“m”) n'ihi na ha na -ahụ amaokwu a ka ọ na -ezo aka na Chineke, yabụ na ha na -atụgharị "ha ga -ele m anya." Ma ndị ntụgharị okwu ndị ọzọ na -enye nnọchiaha onye nke atọ (“ya,” ma ọ bụ “onye ahụ”) n'ihi na ha na -ahụ ahịrịokwu ahụ na -ezo aka na onye ọzọ na -abụghị Chineke. Ma Revised Standard Version (RSV) na New American Bible (NAB) sụgharịrị ahịrịokwu ahụ ka “ka mgbe ha lere ya anya….” Septuagint (nsụgharị Grik nke Agba Ochie, nke e hotara nke ọma na Agba Ọhụrụ) enweghị ntụaka ọ bụla maka onye a marapu.
10 “M ga -awụkwasị ụlọ Devid na ndị bi na Jerusalem mmụọ amara na arịrịọ maka ebere, ka, mgbe ha lere m anya, onye ahụ ha mara ube, ha ga -eruru ya uju, dịka mmadụ na -eru uju maka naanị otu nwa., na -akwa ya akwa nke ukwuu, dịka mmadụ si ebe akwa maka ọkpara.
Zekaraya 12:10 (NIV)
“M ga -awụkwasị ụlọ Devid na ndị bi na Jerusalem mmụọ ọmịiko na arịrịọ, ka, mgbe ha na -ele ya anya onye ha mara ube, ha ga -eruru ya uju, dịka mmadụ si eru uju maka naanị otu nwa, kwaakwanụ ya ákwá nke ukwuu, dị ka mmadụ na-akwa akwa.
Zekaraịa 12:10 (NETS, Septuagint Translation)
10 M'gāwukwasi kwa n'amara amara na ọmiko n'aru ulo Devid na n'aru ndi bi na Jerusalem; ma ha ga -elegide m anya n’ihi na ha agbawo mmeri mmeri, ha g shallti -kwa -ra ya aka n'obi dika ndi anāhu n'anya, ha g withwuta kwa nb painali dika nke ọkpara.
Jọn 19:37, Ha ga -elegide onye ahụ ha mara ube anya
37 Ọzọ kwa Akwụkwọ Nsọ kwuru sị, "Ha ga -ele ya anya onye ha mara ube. "
"Ha ga -ele onye ha mara ube", Nkọwa REV
Ndị ntụgharị okwu na ndị nkọwa kweere na okwu a “dụpuru” kwesịrị ịlaghachi azụ nnochiaha nke “ya” ka ọ na -ehota ụdịdị ederede nke gụrụ “ya” nke ọma. Nke a kwekọrọ na ahịrịokwu nke na -aga n'ihu na okwu “ya” na ahịrịokwu “ha ga -eruru ya uju” na “kwara ya arịrị nke ukwuu.” Nghọta ndị Juu banyere amaokwu a bụ mgbe niile na onye ahụ a marapu bụ onye ya na Chineke nwere mmekọrịta chiri anya, mana enweghị ndekọ nke onye ọ bụla na -akọwa ndị Juu oge mbụ ghọtara Zekaraịa 12:10 na -asị na n'ụzọ ụfọdụ Yahweh n'onwe ya ga -abata n'anụ ahụ. bụrụ “onye a mapuru.” Kama, amaokwu a na -ekwu maka ube nke Mesaya ahụ e kwere na nkwa, onye ọtụtụ ndị nọ na Jerusalem ga -eru uju wee kwaara ya ákwá, yabụ na o doro anya na RSV na NAB na -enye ntụgharị ntụgharị ka mma maka amaokwu a iji kọwaa ihe ọ pụtara.
Ihe ọzọ dị mkpa mere a ga -eji kwere na “ya” bụ ọgụgụ ziri ezi nke ihe odide mbụ nke Zekaraịa 12:10 bụ ụzọ e si hota ya na Jọn 19:37, mgbe onye agha Rom tụbara ube ya n'akụkụ Kraịst. Ihe odide Grik nke Jọn 19:37 na -agụ, sị: “ọzọkwa, akụkụ Akwụkwọ Nsọ ọzọ na -asị, 'Ha ga -ahụ onye ahụ ha mara ube.' “Ya,” ma ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha na -ekwenyeghị n'ịsụgharị ihe odide Grik n'ime Agba Ọhụrụ. Enweghị nsụgharị ọ bụla gụnyere aha onye mbụ (“m”), ọtụtụ n'ime ha na -enyekwa okwu ahụ "ya" dị ka KJV, NAB na RSV si eme ya. Ọ bụrụ na ọgụgụ mbụ nke Zekaraịa 12:10 gụrụ “m” kama ịgụ ya, ”mgbe ahụ“ m ”ga -abụrịrị ịgụ Jọn 12:10. N'aka nke ọzọ, amaokwu New Testament na John 19:37 kwekọrọ n'ịgụ Zekaraịa 19:37 na RSV na nsụgharị ndị ọzọ. Ya mere ọgụgụ ziri ezi nke Zekaraịa 12:10 bụ “ya,” nke ahụ na -egosikwa na Jọn 12.
Ọ bụghị naanị na e hotara Zekaraịa 12:10 na Jọn, kamakwa e zoro aka na ya na Mkpughe. Mkpughe 1: 7 na -asị, “Lee, ọ na -abịa n'igwe ojii, anya niile ga -ahụkwa ya, ọbụna ndị mara ya ube; ndị niile nke ụwa ga -erukwa uju n'ihi ya. Otú ahụ ka ọ ga -adị! Amen. ” Ndị na -ekwu okwu kwetara na amaokwu a zoro aka na Zekaraya, na ọ na -eji nnọchiaha “ya” ọ bụghị “m.” Nke a bụ ihe akaebe karịa na ederede Hibru nke Zekaraịa kwesịrị ịgụ “ya,” ma ọ bụ “nke ahụ,” yabụ anyị na -ekwubi na ihe akaebe dị n'ime Akwụkwọ Nsọ na -egosi na onye ahụ a mara mma na Zekaraịa abụghị Chineke n'onwe ya kama ọ bụ onye nọ n'ime mmekọrịta chiri anya na Chineke, ya bụ, Mezaịa ahụ.
(Revised English Version (REV) Nkọwa Bible, https://www.revisedenglishversion.com/Zechariah/chapter12/10, ejiri ikike mee ihe, Mmekọrịta Mmụọ na Eziokwu)